အမည်မသိစာအုပ်: ကမ်းခြေ (အပိုင်း+တစ်)
ကဲ ကဲ ဘော်ဘော်တို့ လာပီနော်
ကျနော့်ကို တော်တော် ခေါင်းစားသွားအောင် ဖန်တီးလိုက်သူက တခြားသူ မဟုတ်ဘူး။ ကိုဇော်ကြီးရယ်။ နေပြည်တော်မှာ လုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးတစ်ခုကို ကျနော် သွားတက်ပြီး ပြန်လာတာမှ မနေ့ညက ရှိသေး။ ဒီနေ့ မနက် ရုံးခန်းရောက်တော့ ကျနော့်ကို သူ့အခန်းထဲ ခေါ်ပြီး ပြောတာ …။
"ကိုထွန်းထွန်းရာ .. ကျနော်လဲ ရက်ကို သေချာလုပ်တာပဲ .. အခုက ဟိုဘက်က လက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုတဲ့ ဗီယက်နမ်အဖွဲ့ က ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်က စနေနေ့ကို ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ နောက်တစ်ရက် ဆုတ်လိုက်ရတာ"
"အဲဒါက ပြသနာ မရှိဘူး .. ကျနော် ရှိမနေလို့ မဖြစ်ဘူးလားဗျာ .. ကိုဇော်ကြီးတို့ပဲ လုပ်လိုက်လေ"
"အာ .. မဖြစ်လို့ပေါ့ဗျာ .. အဲဒါက ကျနော်ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော် ကိုထွန်းထွန်း .. အမ်ဒီက ပြောတာ .. ကိုထွန်းထွန်း အဆင်မပြေရင် သူနဲ့တွေ့ပြီး ၀င်ပြောမလား"
ကိုဇော်ကြီးက အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ ကျနော် နဲနဲတွန့်သွားတယ်။ တွန့်သွားတယ်ဆိုတာ အမ်ဒီ ဦးနောင်ခွန်ရဲနဲ့ ပြောရမှာ ကြောက်လို့မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ယူထားတဲ့ တာဝန်ကြောင့်။ ကျနော်က ဒီကန်ပနီမှာ ယူထားတာက အော်ပရေးရှင်းအပိုင်းလေ။ အခုဟာက ကျနော်တို့ ကန်ပနီနဲ့ လုပ်ငန်းကြီးလုပ်ဖို့ ပြောထားတဲ့ ဗီယက်နမ်က နာမည်ကြီး ကန်ပနီနဲ့ စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပွဲ။ MOU ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီမှာ ကျနော် ရှိမနေရင် သိပ်တော့ မလွယ်လှဘူး။ အော်ပရေးရှင်းပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Technically ပြောစရာတွေက ရှိနေမှာ သေချာတယ်။ ပြောရမယ်ဆို ဒီအဖွဲ့နဲ့က သေချာ ချိတ်ထားရတာ။ အဆင်မပြေလို့ မဖြစ်ဘူး။ သူတို့ကို လိုက်နေတဲ့ တခြားသော ကန်ပနီတွေက မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အများကြီးလေ။
"ဟူး .. ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့ပါဘူးဗျာ"
"ဒီလိုလုပ်ပါလား .. ညနေမတိုင်ခင် MOU ကိစ္စက ပြီးသွားမှာပဲဗျာ .. အဲဒီမှာ ခင်ဗျားလိုက်သွားပေါ့ .. ချောင်းသာထိရောက်အောင် ကားမမောင်းချင်ဘူးဆိုရင် ကန်ပနီက ဒရိုက်ဘာကို ခေါ်သွားပါလား"
Business Development ပိုင်းကို ကိုင်ထားတဲ့ ကျနော်နဲ့ ရာထူးတူတဲ့ ကိုဇော်ကြီးက ဒီလိုအကြံပေးလိုက်ပေမယ့် ကျနော် သူ့အကြံကိုလည်း သိပ်သဘောမကျဘူး။ ကန်ပနီက ဒရိုင်ဘာကို ခေါ်မသွားချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ပါစင်နယ်ကိစ္စအတွက် ကန်ပနီက လူတွေကို မသုံးချင်တာ။ ရုံးမှာရှိတဲ့ တခြားသူတွေ ဒါမျိုးလုပ်နေကြတာ သူတို့ဟာသူတို့ လိပ်ပြာလုံပေမယ့် ကျနော်ကတော့ မရဘူးဗျ။ တတ်နိုင်ရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ အေးအေးဆေးဆေး သန့်သန့်လေး နေချင်တာ။
ပြသနာက ဒီလိုပါ။ ကျနော်က နေပြည်တော်ကနေ ပြန်လာ၊ ရန်ကုန်ရောက်ရင် စနေနေ့မှာ လုပ်မယ့် လက်မှတ်ထိုးပွဲတက်၊ ပြီးတာနဲ့ အဲဒီနေ့ညမှာ ချောင်းသာကို ကျနော့်ရဲ့ သက်ဆိုင်သူနဲ့ ခရီးထွက်မယ်ဆိုပြီး အစီအစဉ်လုပ်ထားတာ။ ချောင်းသာက တစ်နှစ်ကို အနည်းဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တော့ ဒီလိုမျိုး သွားနေကြ။ တကယ်ဆို အခုရောက်နေတဲ့ လပိုင်းမှာ အရင်နှစ်တွေတုန်းကဆို ကျနော်တို့ ချောင်းသာ သွားပြီးတာတောင် ကြာလှပေါ့။ အခုက ကျနော်က အလုပ်များနေတာနဲ့ သွားဖို့အရေးကို နေ့ရွှေ့ လိုက်၊ ညရွှေ့ လိုက် ဖြစ်နေတာ။ သက်ဆိုင်သူကလည်း ကျနော်နဲ့ တွေ့တိုင်း တကျီကျီနဲ့ ပြောနေတာ။ သူကလည်း တခြားကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ညီမလုပ်တဲ့သူနဲ့ အဲဒီညီမရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျနော်တို့နဲ့အတူ လိုက်ချင်နေတာ။ အဲဒါကြောင့် အခုလို လာမယ့်စနေနေ့မှာ သွားမယ်ဆိုပြီး အတိအကျ အသေအချာ စီစဉ်ပြီးမှ ကျနော် လိုက်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင် အကြီးအကျယ်ကွိုင်ဗျ။ ကိုပန်းရိုင်းစကားနဲ့ဆို အေးအေးဆေးဆေး ဇိမ်နဲ့ဆွဲစားဖို့ စဉ်းစားထားတဲ့ အာပုံလေးလည်း ငတ်မဲ့သဘောပဲ .. ဟီး ;D
ရုံးခန်းအပြင်ဘက်ထွက်ပြီး လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲကို သက်ဆိုင်သူကို ဖုန်းနဲ့ သံတော်ဦး တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ..
"အာ .. အဲဒါကတော့ ကိုကြီးက မမိုက်တာပဲ .. အသေအချာ စီစဉ်ထားတာကို .. ငယ်ငယ်တို့တောင် ရုံးကနေ ခွင့်ယူထားတာ .. ဟိုဘက်က ဟိုတယ်ကလည်း ဒီအချိန်ရဖို့ မနည်းပြောထားရတာကို .. sea view ရဖို့ကို ဘယ်နှစ်ရက်လောက် ကြိုပြောထားရလဲ သိတာပဲဟုတ်"
ညံစီညံစီနဲ့ ထွက်လာတဲ့ ကျနော့် သက်ဆိုင်သူရဲ့ အသံက စိတ်ကောက်တယ်လို့ ပြောရမလား၊ စိတ်ပျက်တယ်လို့ ပြောရမလား မသိတဲ့ အသံနဲ့ဗျ။ ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်ပါတယ်လေ။ အခုဟာက ကိုယ်တွေနှစ်ယောက်ထဲ သွားတာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ညီမနဲ့ တခြားတစ်ယောက်ပါဦးမှာ မှတ်လား။ ကိုယ့်အချင်းချင်းက ပြန်ညှိလို့ရတယ်ဆိုရင်တောင်မှ တခြားသူကို အားနာရဦးမှာလေ။ ကျနော်လည်း ချက်ချင်း ဘာမှ ပြန်မဖြေနိုင်သေးဘဲ ခေါင်းလေးစောင်း၊ မျက်ခုံးတစ်ဖက်ကို လက်ညိုးလေးကွေးကာ ပွတ်ရင်း ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားရတယ်။ အဲဒီမှာ အကြံတစ်ခု စဉ်းစားလို့ရတာနဲ့ ..
"ဒီလိုလုပ်ပါလား သဲရယ် .. သဲတို့ အရင်သွားလိုက်လေ .. ကိုယ်တစ်ရက်နောက်ကျပြီး လိုက်လာခဲ့မယ်ရော .. သဲတစ်ယောက်ထဲမှ မဟုတ်တာ .. ငယ်ငယ်တို့ပါနေမှာပဲလေ .. သဲတို့ ညီအစ်မတွေ ၊ မိန်းကလေးတွေ အချင်းချင်း ကဲလို့လဲ ရတာပေါ့ .. တစ်ရက်ထဲပဲ ဟုတ်စာ"
ကျနော့် စကားကြားတော့ သက်ဆိုင်သူက စဉ်းစားသလိုနဲ့ ငြိမ်သွားတယ်ဗျ။ တအောင့်လောက်ကြာမှ လေသံတိုးတိုးလေးနဲ့ ဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်လဲ။ သဲက ကိုကြီးနဲ့မှ ကဲချင်တာတဲ့ .. အဟဲ .. အဲ့လို အဲ့လိုဗျ :)။ ကျနော့်ထက် ငါးနှစ်နီးပါးလောက်ငယ်တဲ့ ကျနော့်သက်ဆိုင်သူက တစ်ခါတစ်ခါ အဲ့လို ချွဲတတ်တယ်ဗျ။ ဖုန်းထဲမှာတင် မဟုတ်ဘူး။ အိပ်ရာပေါ်မှာလဲ အတူတူပဲ။ ဟဲ .. ဟဲ .. ဆန္ဒမစောပါနဲ့ ကိုယ့်ဆြာတို့ရယ် .. ဒီအကြောင်းတွေ တဖြေးဖြေးခြင်းနဲ့ ရောက်လာမှာပါ။ wink emoticon
သက်ဆိုင်သူနဲ့ ကျနော် ဖုန်းတော်တော်ပြောဖြစ်လိုက်တယ်။ အဓိကကတော့ သူ့နားလည်အောင် ကျနော့်အလုပ်အကြောင်း ရှင်းပြလိုက်တာပါ။ ပြေပြေလည်လည်နဲ့ ရှင်းပြလိုက်တော့လည်း သူက နားလည်ပေးပါတယ်။ ဒါက ဒီကိစ္စမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်ကိစ္စအကြောင်းပြပြီး အမ်ဒီတို့ ကာရာအိုကေသွားလို့ ကျနော် လိုက်သွားရင်တောင် သူက နားလည်ပေးပါတယ်။ Provided that ကျနော် ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သူ့ကို ပြန်ပြောရင်ပေါ့လေ ... အ ဟင်း ဟင်း grin emoticon
ဖုန်းပြောပြီးတဲ့နောက်တော့ ကျနော် တော်တော်အလုပ်များသွားတယ်။ စနေနေ့ညမှာ သွားဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ Tour Company ကို အရင်ဖုန်းဆက်ရတယ်။ ကျနော်တို့က ချောင်းသာကို Express ကားနဲ့ သွားဖို့ စီစဉ်ထားကြတာ။ ချောင်းသာထိ ကျနော့်ကားနဲ့ မောင်းသွားလို့ရပေမယ့် ကျနော်က High Way ကို မမောင်းချင်ဘူး။ နေ့တစ်ဓူဝ ရုံးတက်ရုံးဆင်းကို ကားမောင်းနေရတာဆိုတော့ အပန်းဖြေ ခရီးထွက်မယ့်အချိန်မှာ ကားမောင်းမနေချင်ဘူးလေ။ ဒါကို သက်ဆိုင်သူကလည်း သိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Express Bus ကောင်းကောင်း .. Scania ကား နဲ့ သွားဖို့ စီစဉ်ထားကြတာ။
နဲနဲတော့ Tour Company နဲ့ စကားပြောလိုက်ရပေမယ့် ကံကောင်းချင်တော့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ထွက်မယ့် ကားတစ်စီးမှာ နေရာက ကျန်သေးတယ်။ သိပ်ကောင်းကောင်းတော့ မဟုတ်ဘူး။ နောက်ဆုံးတန်းပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က ရွေးမနေတော့ပါဘူး။ သူတို့က ပိုက်ဆံအပိုမတောင်းဘဲ စီစဉ်ပေးတာတောင် မဆိုးလှဘူး မဟုတ်လား။ ပိုက်ဆံပေးဆိုလည်း အမှန်ကတော့ ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင် ကျနော့်ကိုယ့်ကားကိုယ်မောင်းပြီး လိုက်သွားရမှာလေ။ ဒါက အဓိက ကျပါတယ်။ အခုတော့ တစ်ရက်နောက်ကျတာပဲ ရှိတယ်။ ကျန်တာက မူလ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ...
Tour Company နဲ့ သေချာပြောပြီးလို့ ဖုန်းချလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ရုံးခန်းထဲမှာ ထိုင်ရင်း လက်သီးလက်မောင်းတန်းရင်း ကြွေးကြော်မိတယ်
ရေး ... ပင်လယ်ကြီးရေ .. ကိုယ်လာပြီဟေ့ !!!
တော်တော်တော့ အလုပ်များသွားတယ်ဗျာ။ အခမ်းအနားလုပ်တဲ့ Ballroom ထဲမှာ Sedona က ဘာတွေ ကြွေးတယ်တောင် သေချာ မသိလိုက်ပါဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ MOU ကို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ဟိုဘက်ကလူတွေ၊ ကိုယ့်ကန်ပနီကလူတွေနဲ့ ၀ိုင်ချို သောက်မိတာပဲ ရှိတယ်။ ဟိုဘက်နဲ့ တစ်ခွက်၊ ဒီဘက်နဲ့ တစ်ခွက် .. နှစ်ခွက်ထဲပါ။ အခမ်းအနားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော် လျှောက်ပြောမနေတော့ပါဘူး။ ကျနော် ပြောချင်တာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေး .. ခင်ဗျားတို့ စိတ်ဝင်စားမယ့် ဟာလေးတွေဆီပဲ သွားကြရအောင် … ။
ဖိတ်ကြားထားလို့ တက်ရောက်လာတဲ့ လူတွေထဲမှာ ကျနော်တို့ ကန်ပနီဘက်မှာ ကျနော် မသိတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို မြင်မိတယ်ဗျ။ အင်း .. သတိထားမိတယ်လို့ ပြောရင် ပိုမှန်နေမလား မသိဘူး …။
ပုံမှန်ဆို ဒီလိုမျိုးပွဲကို လာလေ့ရှိတဲ့သူတွေက အနောက်တိုင်းဝတ်စုံနဲ့ လာကြတာ များပါတယ်။ နိုင်ငံခြား ကန်ပနီနဲ့ စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပွဲ မဟုတ်လား။ ကျနော်တောင်မှ အကောင်းစားအနောက်တိုင်းဝတ်စုံ အနက်ရောင် ၀တ်ထားတာလေ။ အမ်ဒီအပါအ၀င် တခြားသူတွေလည်း ဒီလိုပဲ။ ရုံးက ၀န်ထမ်းကောင်မလေးတွေကတော့ သူတို့ ၀တ်စုံ ကုတ်နဲ့ ဒူးဖုံးယုံရှည်တဲ့ စကတ်လေးတွေကို ကိုယ်စီနဲ့ပေါ့။ အမ်ဒီ ပီအေကတော့ အပေါ်အောက်ဝမ်းဆက် ဂါဝန်ရှည်နဲ့။ အဲ့လို .. အဲ့လို .. သူသူကိုယ်ကိုယ် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကို ၀တ်ထားတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီကောင်မလေးက ဗမာရိုးရာဝတ်စုံ အ၀ါရောင်လေးကို စတိုင်လ်ကျကျနဲ့ ၀တ်ထားတာ။
ပွဲနေပွဲထိုင်သွားရင် ၀တ်လေ့ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ အကောင်းစားကို ကိုယ်တိုင်းနဲ့ အတိအကျ ချုပ်ထားမှန်း မိန်းကလေးပီသတဲ့ ကောက်ကြောင်းတွေကို အပြည့်အ၀မြင်နေရတာနဲ့ သိသာနေတယ်ဗျာ။ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်း၊ အသားဖြူဖြူလေးနဲ့ လှတာက အတော်လှတဲ့ ကောင်မလေး။ ၀တ်ထားတဲ့ ရင်ဖုံးအင်္ကျီက လက်ပြတ်ဆိုတော့ ၀င်းဝါဖြူဖွေးနေတဲ့ လက်မောင်းသား ဖွေးဖွေးလေးတွေကို မြင်နေရတာကိုက ရင်ခုန်ချင်စရာကောင်းနေတယ်။ ခါးကလေးကလည်း သေးသေးကျင်ကျင်လေး ဖြစ်သလို၊ ၀မ်းပြင်သားလေးက ချပ်ချပ်လေးနဲ့ ဆိုတော့ ရင်ဖုံးအင်္ကျီရဲ့ အောက်မှာ ရုန်းကန်ကြွတက်မလို ဖြစ်နေတဲ့ ရင်ကချီချီလေးရယ် (ကိုယ့်ဆြာတို့ ကိုယ်လုံးလှတဲ့ မြန်မာကောင်မလေးတွေ ဗမာဝတ်စုံဝတ်ထားတာ မြင်ဖူးရင် ကျနော်ပြောနေတာ မျက်စိထဲ မြင်ကြမှာပါ)
အရပ်ကလေးကလည်း မနိမ့်မမြင့်နဲ့ အနေတော်လေးရယ်။ ကျနော် သဘောကျမိတာက ကောင်မလေးက ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးလေး ဖြစ်နေတာကို။ ကြီးလာရင်တော့ ဒီလို ခန္ဓာကိုယ်မျိုးက ဘယ်လိုနေမယ် မသိပေမယ့် အခုလို အသက်၂၀ကျော်လောက် ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ မြင်လိုက်တာနဲ့ ဖီးလ်တက်စေတာဗျ။ တင်းတင်းရင်းရင်လေး ပတ်ထားတဲ့ ထမိန်စကတ်လေးရဲ့ အောက်မှာ ရှိတဲ့ တင်အိုးတွေအကြောင်းတော့ အထူးတလည် ပြောမနေတော့ပါဘူး။ ကိုပန်းရိုင်း အင်မတန်မှ ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အတန်းအစားထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါတယ်လို့ ပြောရမယ်။
ကျနော် သေချာ နားမလည်တာက ဒီကောင်မလေးက ကိုယ့်ကန်ပနီက ဖြစ်နေတာပဲ။ ၀န်ထမ်းလား ဘာလားတော့ ကျနော်လည်း သေချာ မသိဘူး။ အမ်ဒီနားမှာ ကပ်နေပြီး လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ လုပ်ပေးနေတာ တွေ့တယ်။ အကယ်၍ နောက်ထပ်ခန့်လိုက်တဲ့ ၀န်ထမ်းဆိုရင်တော့ ကျနော်တော့ ရုံးချုပ်ပြန်ချင်တော့တာပဲ .. ဟီး ;D။ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် အောပရေးရှင်းဘက်ကနေ ရုံးချုပ်ပြောင်းဖို့ ဆန္ဒဖြစ်တာ ဒီတစ်ခါပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်။ ကိုဇော်ကြီး သိရင်တော့ ဘာပြောမလဲ မသိဘူး။
တကယ်လည်း ကိုဇော်ကြီးက ပြောပါတယ် .. ကျနော် သွားပြီး အ၀ါရောင်ကောက်ကြောင်းလေး အကြောင်း အစ်ကြည့်သလိုနဲ့ မေးတဲ့အခါမှာလေ
“ဟ .. မင်း မသိဘူးလား … အမ်ဒီရဲ့ တူမ နန်းယွန်းဝေဆိုတာ .. ကောင်မလေးက စလုံးကနေ စီးပွားရေးဘွဲ့တစ်ခုနဲ့ ကျောင်းပြီးလာတာ .. အဲဒါ ကန်ပနီမှာ အလုပ်ဝင်မလို့လေ .. အမ်ဒီ ပီအေအနေနဲ့ .. ဘာလဲ အားလုံးထဲမှာ ပေါ်ပေါ်လွင်လွင် ဖြစ်နေလို့ မျက်စိကျနေတာလား”
“အာ .. မဟုတ်ပါဘူး .. ကိုဇော်ကြီးရာ .. ကျနော်က ထူးဆန်းနေလို့ပါ .. အမ်ဒီ ပီအေ ထပ်ခန့်မယ်လို့ မထင်ဘူး .. မ၀ါက ဘာဖြစ်လို့လဲ”
မ၀ါဆိုတာ ၀ါဝါမောင်ဆိုတဲ့ အမ်ဒီ ပီအေ။ ဂါဝန်ရှည် ၀တ်ထားတယ်ဆိုတဲ့တစ်ယောက်လေ။ အသက်၃၅လောက် ရှိပေမယ့် မပျက်စီးတဲ့ အနေအထားရှိတဲ့ အမျိုးသမီး။
“ရှူး .. တိုးတိုး .. ငါ့လူ .. တစ်ချို့ ကိစ္စတွေ ကိုယ်ဝင်မပါတာကောင်းတယ် .. တော်ကြာ ကြားကနေ ဆားညှပ်နေမယ်”
“အော် .. ဒီလိုလား .. အင်းပါ .. မမေးတော့ပါဘူး”
ကိုဇော်ကြီးနဲ့ အဲ့လို ပြောပြီးတဲ့နောက် ကျနော်လည်း ခံတွင်းချဉ်လာတာနဲ့ ခန်းမထဲကနေ ထွက်ပြီး၊ အပြင်မှာ စီးကရက်သောက်ဖို့ စီးကရက်တစ်လိပ်ကို မီးညှိလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ကျနော် ရှိနေတဲ့ နေရာမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် တော်တော်ပေါက်ကွဲနေတဲ့ အသံနဲ့ ဖုန်းပြောနေတာကို ကြားရပါရော။ ကျနော့်ကို နောက်ကျောပေးထားလို့ ကျနော်ရောက်နေတာ သူမ မသိလောက်ဘူး။ ဖုန်းကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကိုင် .. နားနားကပ်ထားပြီး၊ ကျန်တဲ့တစ်ဖက်က လက်ဟန်အပြည့်နဲ့လှုပ်ရှားပြီး ဖုန်းထဲကလူကို အားရပါးရ ကောနေတာဗျ။
တခြားသူ မဟုတ်ဘူး .. နန်းယွန်းဝေဆိုတဲ့ အ၀ါရောင်ဝမ်းဆက် ၀တ်စုံလေးနဲ့ ရှမ်းမချောလေးရယ်လေ …
"ဒါကတော့ သွေးကမမိုက်တာ .. သေချာစီစဉ်ထားပြီးမှ ဘာအထာလဲ .. အိမ်မပိုင်ဘူးဆိုလဲ ဂေါ်လီမလုပ်နဲ့လေ .. ယွန်းတောင်မှ ဘယ်လောက်အထိ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်ထားရတယ်ဆိုတာ သွေးအသိပဲ"
"အို .. တော်ပြီ .. တော်ပြီ .. ဘာမှ လာရှင်းပြမနေနဲ့ .. လိုက်မှာလား မလိုက်ဘူးလား တစ်ခွန်းထဲသာ ပြော .. ယွန်း သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး"
"ဘာမှ တောင်းပန်စရာမလိုဘူး … ယွန်းကတော့ သွေးမပါလဲ သွားမှာပဲ .. အကြီးအကျယ် စီစဉ်ထားတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ဒီလိုမျိုးတော့ အပျက်မခံနိုင်ဘူး"
လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ ပြောနေယုံမက ကိုယ်လုံးလေးကပါ သိမ့်သိမ့်တုန်နေလို့ ဒီကောင်မလေး တော်တော်စိတ်ဆိုးနေမှန်း ကျနော် သိလိုက်တယ်။ တကယ်ဆို ကျနော် ဒီနေရာက လှည့်ထွက်သွားသင့်တာပါ။ ဒါ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့  အတွင်းရေးကိစ္စ မဟုတ်လား။ ချောင်းမြောင်းပြီး နားထောင်မနေသင့်ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ့ ဒီရှမ်းမချောလေး စိတ်ဆိုးနေတဲ့ မျက်နှာလေးကို တစ်ချက်လောက်တော့ မြင်ချင်သေးတယ် (dark desire ပေါ့ဗျာ .. လေယာဉ်ပေါ်မှာ လေယာဉ်မယ်လေး အစားအသောက်လာချပေးတဲ့အချိန် တစ်ချက်လောက် ဖမ်းရှိုးချင်တဲ့သဘောမျိုးလေ .. အဟီး)။ အဲဒါနဲ့ မီးညှိ်ထားတဲ့ ဆေးလိပ်ကို မသောက်သေးဘဲ မသိမသာနဲ့ ကိုယ်ကိုရွှေ့ ပြီး နန်းယွန်းဝေနဲ့ ဘေးတိုက်အနေအထားရောက်အောင် ပြောင်းလိုက်တယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ကျနော်က နေရာအပြောင်း နန်းယွန်းဝေကလည်း ဖုန်းပြောတာကို ဖြတ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ကိုနောက်ကို ချာခနဲ လှည့်လိုက်တာဗျာ။ မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထားနဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့အချိန် သူ့မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်တော့ ဖြူဝင်းနေတဲ့ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးရဲ့  ပါးမို့မို့လေး နှစ်ဖက်ဟာ ဆိုးထားတဲ့ ပန်းဆီရောင် နှုတ်ခမ်းနီလေး နီးပါးအတိုင်းတောင် ဖြစ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် လှတာကတော့ဗျာ တော်တော်လေးကို လှတယ်လို့ ပြောရမယ်။ မိန်းမလှလေးတွေ စိတ်ဆိုးရင် လှအောင်လည်း စိတ်ဆိုးတတ်တာပဲလားဗျ။ ကျနော့်ရှေ့ မှာ အံ့အားသင့်တဲ့ဟန်နဲ့ ကျနော့်ကို လှမ်းကြည့်နေတဲ့ နန်းယွန်းဝေက သက်သေခံနေတယ်။ ကင်မရာသာ ရှိလို့ကတော့ အဲ့ဒီ မျက်နှာလေးကို သေချာပေါက် ဒုံပတ် ရိုက်ထားချင်လိုက်တာ …။
"ဆောရီးဗျာ .. ကျနော်က ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ ထွက်လာတာ"
အခုထက်ထိ မသောက်ရသေးတဲ့ စီးကရက်ကို ထောင်ပြရင်းနဲ့ လူကြီးလူကောင်းဆန်စွာပဲ ကျနော်က အရင် ကြိုတောင်းပန်ရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်တယ်။ ကျနော့် မျက်နှာပေါ်က အမူအရာကို ကြည့်ရင်း နန်းယွန်းဝေရဲ့ မျက်နှာဖွေးဖွေးလေးမှာ အနီရောင်လှိုင်းလေးတွေ ထပ်မံပြီး ပြေးသွားပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ဒါကို ရှက်သွေးလို့ ပြောင်းခေါ်ရမှာပေါ့။ ခနနေတော့ ပန်းလှလှလေး တစ်ပွင့် ပွင့်ဖူးလာသလို သွားဖြူတန်းလေးတွေ ပေါ်လာတဲ့အထိ အပြုံးလေးတစ်ခုကို ဖန်ဆင်းရင်းနဲ့ သူက ကျနော့်ကို ပြန်နှုတ်ဆက်တယ်။
"ကိုထွန်းထွန်း .. ဟုတ်တယ် မှတ်လား .. အော်ပရေးရှင်းဘက်က ??"
"ဟုတ်ပါတယ် .. ကျနော် ထွန်းထွန်းပါ .. မနန်းယွန်းဝေ .. ဟုတ်"
ကန်ပနီ တစ်ခုထဲက လူတွေမှန်း အခုမှ သေချာသိတာဆိုတော့ စောစောတုန်းက မိတ်မဆက်ဖြစ်သေးတာကို ကျနော်ကပဲ စလိုက်ပြီး စီးကရက်ကို လက်ပြောင်းကိုင်၊ ညာလက်ကို ကမ်းပေးလိုက်တယ်။ အံမယ် .. အခုကျတော့ နန်းယွန်းဝေက အေးအေးဆေးဆေးပဲဗျ။ သူမ အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် တည်တည်ကြည်ကြည်ပုံလေးနဲ့ ကျနော့်လက်ကို သူ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ လှမ်းကိုင်ပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါရော။ သူ့လက်ဖ၀ါးပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်းလေး ကျနော့်လက်ထဲ ရောက်လာချိန်မှာ ကျနော် သတိထားမိတာ လက်ချောင်းလေးတွေတိုင်း လက်သည်းခွံကို တစ်ခုချင်းစီ အရောင်တစ်မျိုးစီ ဆိုးထားပြီး ပန်းခက်လေးတွေ ပုံဖော်ထားတာ။ လှတယ်ဗျ။ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး လက်ချောင်းအိအိလေးတွေကို အနားသတ်ထားတာ ချစ်စရာလေးတွေ။ လက်စွပ်တွေ ဘာတွေတော့ မရှိဘူး။ ပန်ဒိုရာလေး တစ်ကွင်းကိုသာ ၀တ်ထားတာ တွေ့တယ်။
"အဲဒီ စီးကရက်က သောက်ဦးမှာလား ကိုထွန်းထွန်း"
ဖောင်းအိနေတဲ့ လက်ကလေးကို အနုလုံပဋိလုံ လေ့လာမိနေတဲ့ ကျနော် .. ရုတ်တရက် မေးလိုက်တဲ့ နန်းယွန်းဝေရဲ့ စကားကြောင့် သူ့မျက်နှာလေးကို ကမန်းကတမ်း မော့ကြည့်တော့ ပြုံစေ့စေ့ မျက်နှာပေးနဲ့ ကျနော့်လက်ထဲက အခုအချိန်ထိ မသောက်ရသေးတဲ့ စီးကရက်ကို မေးငေါ့ပြတယ်။ ဒီတော့မှ ကျနော်လည်း အနည်းငယ် ရှက်သလို ဖြစ်သွားပြီး၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ စီးကရက်ကို သောက်မယ်လို့ နှုတ်ခမ်းနဲ့တေ့ဖို့ ပြင်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော့်ဟန်းဖုန်းက မြည်လာပါရော။ တခြားမဟုတ်ဘူး .. ကိုဇော်ကြီးက ကျနော့်ကို လှမ်းခေါ်တာ။ အရေးကြီး ကိစ္စဆိုတော့ အခုချက်ချင်း လာခဲ့မယ်လို့ ပြန်ပြောလိုက်ရတယ်။ ဖုန်းချပြီးတာနဲ့ လက်ထဲမှာ အခုထက်ထိ မသောက်ရသေးတဲ့ စီးကရက်ကို မီးငြိမ်းသတ်ဖို့ ပြင်နေတုန်းမှာ
"ကိုထွန်းထွန်း မသောက်ဖြစ်တော့ရင် ယွန်းကို အဲဒီစီးကရက် ပေးခဲ့ပါလား"
"ဗျာ !!" (ကျနော် ယောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားတယ်)
"ယွန်း နဲနဲစိတ်ရှုပ်နေလို့ စီးကရက် သောက်ချင်လို့ .. စီးကရက်ကလဲ ဆောင်ထားလေ့ မရှိဘူးလေ"
"အာ … ဒါဆို အသစ်တစ်လိပ်ယူလိုက်ပါလား"
"နိုး .. နိုး .. ရတယ် .. တစ်လိပ်လုံးလဲ မသောက်ချင်ဘူး .. အဲဒီ ကျန်သလောက်လေးဆို ဖြစ်ပါတယ် .. ကိုထွန်းထွန်းမှ မသောက်ရသေးတာ"
ကဲဗျာ .. ဘယ်လိုကောင်မလေးမှန်း မသိသလို၊ ကျနော် ဘာပြန်ပြောရမှန်းလဲ မသိတော့ဘူး။ နောက်ဆုံး ကိုဇော်ကြီး ခေါ်ထားတဲ့ ကိစ္စက ရှိနေတော့ လက်ထဲမှာ တစ်ဖွာမှ မဖွာရသေးတဲ့ စီးကရက်ကိုပဲ ထိုးပေးလိုက်ရင်း ခန်းမဘက်ရှိရာကို ခပ်သုတ်သုတ်နဲ့ ပြန်လျှောက်လာခဲ့ရတယ်။ နောက်ဘက်မှာတော့ Thanks ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးဟာ နန်းယွန်းဝေဆိုတဲ့ ရှမ်းမချောချောလေးနဲ့ အတူ ကျန်ခဲ့တာပေါ့လေ။
ကားထွက်မယ်လို့ ပြောထားတဲ့ ဘူတာကြီးရှေ့ ကို ကျနော် ည၈နာရီခွဲ မတိုင်ခင်ပဲ ရောက်သွားတယ်ဗျ။ စောစောစီးစီး ရောက်အောင်လဲ အိမ်က ကြိုထွက်လာတာပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ ကားပိတ်ချက်နဲ့ ဟိုနားဒီနား သွားဖို့တောင် နာရီဝက်လောက် ကြာသွားနိုင်တာလေ။ ကျနော် ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ တခြားခရီးသည်တွေတောင် မရှိသေးပါဘူး။ ကားပေါ်လိုက်မယ့် in-charge person ရယ်၊ ကားဒရိုင်ဘာရယ်ပဲ ရှိနေတယ်။ ကိုယ်က ဖုန်းဆက်ပြီး ရက်ပြန်ပြောင်းထားရတာဆိုတော့ သေချာအောင်ဆိုပြီး ကိုကံကောင်းဆိုတဲ့ ကားပ်ါလိုက်မယ့်လူကို သွားမေးတော့
"ဟုတ်တယ် .. အကို .. နောက်ဆုံးတန်းပဲ .. ဘယ်သူမှ မရှိဘူး .. အကိုတစ်ယောက်ထဲပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာ လိုက်လာခဲ့တော့"
ဆိုပြီး ပြောတယ်။ ကိုကံကောင်းကြည့်ရတာ ဒီလိုခရီးတွေမှာ ကားလိုက်တဲ့သူတွေ ထုံးစံအတိုင်း စကားပြောကောင်းတယ်။ ကျနော်ကလည်း စကားပြောကောင်းတဲ့လူဆိုတော့ ခနအတွင်းမှာ အဖွဲ့ကျသွားတယ်။ သူရယ် ကားဆရာရယ်ကို ပါလာတဲ့ စီးကရက်ဗူးနဲ့ တည့်ခင်းဧည့်ခံရင်း စကားကောင်းနေလိုက်တာ သက်ဆိုင်သူကို ဖုန်းဆက်ဖို့တောင် မေ့နေလို့ သူခေါ်မှပဲ အပြေးအလွှားကိုင်လိုက်ရတယ်။ သက်ဆိုင်သူနဲ့ ကျနော် ဖုန်းပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကိုကံကောင်းက ကားစထွက်တော့မယ်ဆိုပြီး လာပြောလို့ ကျနော် ကားပေါ်တက်လာခဲ့တယ်။ ပြောထားတဲ့အတိုင်း နောက်ဆုံးတန်းပေါ့။ လမ်းမဘက်ကို ငေးလို့ရမယ့် ထောင့်ကို ကပ်ပြီး ခြေတန်ဆန့်၊ နောက်ကျောမှီပြီး ထိုင်ချလိုက်တယ်။
ကဲ .. မနက်ကျရင် ချောင်းသာရောက်ပြီပေါ့ဗျာ …
ရန်ကုန်မြို့ ထဲ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာ ရောက်ဖို့ကို တော်တော်မောင်းရတာပေါ့။ ကားကြီးဆိုတော့ ပိုတောင်ဆိုးသေး။ လမ်းကြောင်းရဖို့ကို တော်တော်စောင့်ရတာ။ ခနတော့ ကျနော် လမ်းဘေးကို ငေးပြီး ကားရပ်လိုက်တိုင်းမှာ တက်လာတဲ့ လူတွေကို ငေးကြည့်နေသေးတယ်။ များသောအားဖြင့် မိသားစုလိုက်သွားတာတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ စုသွားတာတွေ၊ အတွဲလေးတွေ ဒါတွေပါပဲ။ ကျနော့်လို တစ်ယောက်ထဲသမားက တစ်ကားလုံးမှာမှ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲလားတောင် မသိပါဘူး။ ဟူး .. မတတ်နိုင်ဘူးလေ .. ဒါကတော့ ကိုယ့်အကြောင်းတရားနဲ့ကိုယ်ပဲ …။ နောက်တော့ အပြင်ဘက်ကို ငေးမနေတော့ဘဲ သက်ဆိုင်သူ ဖေ့ဘုတ်မှာ တင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုပဲ လိုက်ခ်ပေးရင်း အင်တာနက်သုံးနေလိုက်တယ်။
တော်တော်လေး ကြာတော့ မျက်လုံးညောင်းလာလို့ ခနမျက်စိမှိတ်ပြီး ငိုက်လိုက်တယ်။ ကားကပုံမှန် အရှိန်နဲ့ မောင်းလာမှန်း ငိုက်နေရင်းနဲ့ သတိထားမိတယ်။ ကြည့်ရတာ ရန်ကုန်မြို့ ထဲက ထွက်ခဲ့ပြီနဲ့တူတယ်။ ကျနော်ထင်တာ ဟုတ်မှန်း ရန်ကုန်မြို့ အလွန်က ဓါတ်ဆီဆိုင်မှာ ဆီဖြည့်တော့ သိလိုက်တယ်။ တခြားသူတွေ ကားပေါ်ကဆင်းပေမယ့် ကျနော်ကတော့ ဆင်းမနေတော့ဘူး။ ငိုက်လိုက်စနဲ့ ဆက်ငိုက်နေတယ်။ အမှန်အတိုင်းဆို ကျနော် ဒီအချိန် အိပ်မငိုက်သေးဘူးရယ်။ အခုဟာက တစ်နေ့လုံးပင်ပန်းထားတာရှိနေတဲ့အပြင် နောက်ဆုံးတန်းက ခုံမှာ ထိုင်နေရတာလဲပါတယ်။ ခေါင်းထဲ တစ်မျိုးဖြစ်လာပြီး လူက မလန်းတော့လို့ ငိုက်နေတာ။ ကားပြန်ထွက်လာတော့ မျက်စိတောင် ဖွင့်ကြည့်မနေတော့ပါဘူး။ တောက်လျှောက်ကို ငိုက်လာတာ ကိုကံကောင်းက ပန်းတနော်မှာ ထမင်းစားဖို့ ရပ်တော့မှပဲ ငိုက်နေရာကနေ နိုးတော့တယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ဆက်အိပ်နေလို့ မရတော့ဘူး။ ကားပေါ်က လူအကုန်ဆင်းရတော့မှာ။ ကျနော်လည်း ကိုယ်ပေါ်လွှမ်းထားတဲ့ စောင်ကိုဖယ်ပြီး အောက်ဆင်းဖို့ ပြင်ရတော့တယ်။ ယူစရာရှိတာကို ယူပြီး အောက်ဆင်းမယ်ပြင်တော့ ချွတ်ထားတဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံက ရှာလို့မတွေ့ဘူး။ အဲဒီမှာ ဖိနပ်မပါဘဲနဲ့ အောက်ဆင်းလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး လူသွားလမ်းမှာ ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ ခုံအောက်တွေမှာ လိုက်ရှာရတာပေါ့။ တော်သေးတယ်။ ရှေ့တစ်ခုံကျော်ရဲ့ အောက်မှာ တွေ့လို့။ ၀မ်းသာအားရနဲ့ ကိုယ့်ဖိနပ်ကိုလှမ်းဆွဲပြီး ယူမယ်ပြင်တော့ ဖိနပ်နားမှာ ခပ်လုံးလုံးအရာလေးတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ပါရော။
ဘာလဲဆိုပြီး အဲဒီအနက်လုံးလေးကို ကောက်လိုက်တော့ နာမည်ကြီးတံဆိပ်တစ်ခုကို တွေ့လိုက်တယ်။ ဘာလဲဆိုတာ ကျနော်သိပြီး အလုံးဗူးကို တစ်ခြမ်းစီ ဖွင့်လိုက်တော့ အထဲမှာ ပန်းနုရောင် headphone လှလှလေး တစ်ခုကို တွေ့လိုက်ပါရော။ တော်တော်ရှားပြီး ဈေးကြီးပေးရမယ်ဆိုတာ သိနေတယ်။ ကျနော်လည်း ဒါက အဲဒီခုံနေရာကလူတွေပဲ ကျကျန်ခဲ့တာလား၊ တခြားခုံဖက်ကနေ လိမ့်လာတာလား မသိတော့ အိပ်ထဲကောက်ထည့်ပြီး အောက်ဆင်းလာမယ် ပြင်တာပေါ့။ အဲဒီမှာ လူတော်တော် ရှင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ကားပေါ်ကို ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဒရောသောပါးနဲ့ ပြန်တက်လာတာ တွေ့လိုက်တာ။ လားလား .. တခြားသူ မဟုတ်ဘူး .. ကိုယ့်ဆြာ .. နန်းယွန်းဝေရယ်
နန်းယွန်းဝေမှ တကယ်ကို နန်းယွန်းဝေ ..
ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ နေ့လယ်ကနေ မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ မဟုတ်တော့ဘူး။ အနက်ရောင် Dress ပျော့လေးကို ကျော့ကျော့မော့မော့လေး ၀တ်ထားတဲ့ မဟူရာနတ်သမီးလေးရယ်။ နေ့လည်တုန်းက မြန်မာဆန်ဆန် ဆံထုံးလှလှလေး ထိုးထားတဲ့ နီညိုရောင် ဆံနွယ်တွေဟာ အခုကျတော့ ညာဘက်ရင်အုပ်ခြမ်းပေါ်မှာ အလိပ်လိုက် ခွေနေလေရဲ့ ။ မသိမသာ ချယ်သထားတဲ့ မျက်နှာလေးက နေ့လည်တုန်းကလိုပဲ ဖူးဖူးလေးနဲ့ လှနေလေရဲ့ ။
သူရော .. ကျနော်ရော တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း အံ့အားသင့်နေကြတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စက္ကန့်ပိုင်းလောက်တောင် စကားမပြောဖြစ်ဘဲ ငေးနေကြတယ်လို့ ဆိုလို့ရမယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာရှိတဲ့ သုံးပေလောက် အကွာအဝေးရှိမယ့် လေထုဟာ ခံစားမှုတစ်ခုနဲ့ ရုတ်တရက်ပြည့်လာသလိုတောင် ထင်ရတယ်။ ခနနေတော့ ကျနော့်ထက် အရင် သူက အသိဝင်လာသလိုနဲ့ အပြုံးပန်းလေးတစ်ခု ဖန်ဆင်းပြီး ညာလက်ကလေးမြှောက်ရင်း ကျနော်ကိုင်ထားတဲ့ အနက်ရောင်လုံးလေးကို လက်ညိုးထိုးပြတယ်။
"ကိုထွန်းထွန်း .. အဲဒါ ယွန်းဟာလေး .. ယွန်းက အောက်ဆင်းသွားပြီမှ သတိထားမိတာ .. ပျောက်သွားရင် ဒုက္ခဆိုပြီး ကမန်းကတမ်း ပြန်ရှာဖို့ တက်လာတာ"
"အော် .. ဒါ .. မနန်းယွန်းဝေ ဟာလား"
ကျနော်က ညနတ်သမီးလေးကို လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ အလုံးလေး ကမ်းပေးလိုက်တော့ ကျနော့်ဆီက ဟာကို မယူသေးဘဲ ပါးစပ်ကို လက်ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ ချစ်စဖွယ်လေး ပိတ်ပြီး ရယ်တယ်။ ကျနော်က ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့အထဲမှာ ဘာရယ်စရာပါလဲလို့ မေးတဲ့ဟန်နှင့် သူ့ကို ကြည့်လိုက်တော့
"မနန်းယွန်းဝေဆိုပြီး နာမည် အပြည့်အစုံကြီး ခေါ်လိုက်လို့ပါ ... ယွန်းကို ဘယ်သူမှ အဲ့လို မခေါ်ကြတော့လို့ပါ .. ကိုထွန်းထွန်းထက် ယွန်းက အများကြီးငယ်တာပဲ .. ယွန်းလို့ပဲ ခေါ်ပါ"
သူ့ပစ္စည်းပြန်ရလို့ ရွှင်မြူးသွားတာပဲလား၊ အလုပ်ထဲက အသိတစ်ယောက်ကို ကားပေါ်မှာ မထင်ထားဘဲ တွေ့လိုက်ရလို့ ပျော်မြူးသွားတာပဲလားတော့ မသိဘူး။ နန်းယွန်းဝေ ပုံစံက ဆယ်ကျော်သက်ချာတိတ်မလေး အသွင် ချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်။ ကျနော်နဲ့ အပြန်အလှန် စကားပြောရင်း သူကပဲ ရှေ့ကဦးဆောင်ပြီး ကားပေါ်က ဆင်းသွားတယ်။
ကားရပ်ပေးထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ထဲ ယွန်းနဲ့အတူဝင်လာတော့ အထဲမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်က နားထဲအလိုလိုရောက်လာတယ်။ တက်သစ်စ အဆိုတော်မလေး ဂေးဂေးရဲ့  ရင်ခုန်သံဆုံမှတ်ဆိုတဲ့ သီချင်း ...
အင်း ... ကျနော်တော့ ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး
ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး သကာလ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ဆိုင်ထောင့်တစ်နေရာက စားပွဲတစ်လုံးမှာ အတူထိုင်မိကြတယ်။ ကျနော့် စိတ်ထဲမှာ နန်းယွန်းဝေနဲ့ အတူထိုင်ရတာ တစ်မျိုးဖြစ်နေပြီ။ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့က တွေ့ဖူးတာမှ ဘယ်လောက်မှ မရှိသေးဘူး။ သူ့အကြောင်း ကျနော် ဘာမှ မသိသလို၊ ကျနော့်အကြောင်းလည်း သူ သိချင်မှသိမှာပါ။ ပုံမှန်ဆိုရင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဒီလိုမျိုးတွဲထိုင်ရတာ ကျနော် ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်ပေမယ့်၊ နန်းယွန်းဝေက တော်တော်လှနေတော့ အခက်သားလားဗျ။
ယွန်းရဲ့ အသားအရည်က ရှမ်းမလေးဆိုတော့ ဖြူဖွေးပြီး ၀င်းလဲ့နေတာဗျာ။ နေ့လည်တုန်းက မသိသာလှတဲ့ သူ့ဆံနွယ်နီညိုရောင် အခွေလေးတွေက အခုတော့ လှပတဲ့ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ လိုက်ဖက်ညီပြီး ရင်အုံမို့မို့လေးပေါ်မှာ ချစ်စဖွယ် လဲလျောင်းနေတာ။ နက်မှောင်တဲ့ မျက်ဆံလေးတွေရှိတဲ့ မျက်လုံးလေးတွေဟာ အရည်ကြည်လဲ့လဲ့နဲ့ သမင်မလေးအလား ထင်ရတယ်။ နှာတံလုံးလုံးလေးရဲ့ အောက်က နှုတ်ခမ်းလေးတွေကတော့ လေးကိုင်းလိုပဲ ကွေးညွှတ်ပြီး မကြီးလွန်း မသေးလွန်းတဲ့အနေအထားဗျ။ လည်တိုင်ကျော့ကျော့အောက်က ရွှေရင်နှစ်မွှာကလည်း ပျော့ပြောင်းတဲ့ ၀တ်စုံရဲ့ အောက်မှာ မို့မို့ဝန်းဝန်းလေး ရှိနေတာ။ သိပ်တော့အကြီးကြီး မဟုတ်သလို၊ သိပ်တော့လည်း သေးလှတယ်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ဘရာအကူကြောင့်သာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကျနော့်လက်တစ်ကိုင်စာ အနေတော်လေး …
(ဟိုက် .. ငါ ဘာတွေ တွေးနေမိတာပါလိမ့်)
ခေါင်းထဲ ၀င်လာတဲ့ အတွေးကို ဖြတ်ခနဲ မောင်းထုတ်လိုက်တော့ ဘာရယ်မဟုတ်၊ အကျင့်ပါနေတဲ့ ခေါင်းက အလိုလို ခါမိသွားပါရော ..။
“ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုထွန်းထွန်း .. နေမကောင်းလို့လား”
ကျနော့်မျက်နှာက အသွင်ကို ကြည့်ပြီး ကြင်နာသလို လေသံချိုလေးနဲ့ မေးတော့ ကျနော့်ဖြင့် ရုတ်တရက် ဘာပြန်ပြောရမှန်းတောင် မသိဘူး။ နောက်တော့မှ ခေါင်းထဲ ဖြတ်ခနဲ ၀င်လာတဲ့ အတွေးအတိုင်း ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
“မဟုတ်ပါဘူး .. ကျနော် ခေါင်းကိုက်သလို ဖြစ်နေလို့”
“ခေါင်းကိုက်နေလို့ .. ဟုတ်လား .. ဘာဖြစ်လို့လဲ”
“ဟိုဟာလေ .. တစ်နေ့လုံး ပင်ပန်းထားတာရော .. နောက်ဆုံးတန်းမှာ ထိုင်ပြီး လိုက်လာတာကြောင့်ရောပဲ”
“အော် .. ဟုတ်သားပဲ .. နောက်ဆုံးတန်းက မကောင်းဘူး .. ကားမူးတတ်တဲ့သူဆိုရင် အဆင်မပြေဘူး .. ခေါင်းကြည်သွားအောင် တစ်ခုခု သောက်လိုက်ပါလား”
“ကောင်းသားပဲ .. ယွန်းရော ဘာသောက်မလဲ .. ကျနော် မှာလိုက်မယ် .. တစ်ခုခု စားပါဦးလား”
“မစားတော့ဘူး .. ယွန်း ဒီအချိန် အစာမစားတတ်ဘူး ..”
“ဟုတ်သားပဲ .. မဟုတ်ရင် ကိုယ်အလေးချိန် တိုးလာမှာပေါ့”
“အင်း နော် .. အခုတောင် ၀နေပြီလား မသိဘူး”
“အာ .. မ၀ပါဘူး .. ပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ တော်တော်ကြည့်ကောင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးပါ” (ဟိုက် .. မရည်ရွယ်ဘဲ ကျနော့် ပါးစပ်က လှစ်ခနဲ ပြောထွက်သွားတယ်)
“တကယ် ?? .. မြှောက်မပြောလည်း ယွန်းက ကိုထွန်းသောက်ချင်တာ တိုက်မှာပါ” (ကျနော့် နာမည် ကိုထွန်းထွန်းကနေ ထွန်းတစ်လုံးပြုတ်သွားမှန်း အဲဒီတုန်းက သေချာသတိမထားမိလိုက်ဘူး)
“အာ .. မဟုတ်တာ .. ကျနော် တိုက်မှာပါ .. လစ်ပတန်ဆိုရင် အဆင်ပြေလား”
“ကောင်းသားပဲ … ကားပေါ်က အဲယားကွန်းကလဲ အရမ်းအေးတာဆိုတော့ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ .. လစ်ပတန်ပဲလုပ်ပါ”
ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် .. မှာထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်ရောက်လာတာကို စောင့်ရင်းနဲ့ပဲ စကားစမြည် ဆက်ပြောနေလိုက်တယ်။ ကောင်းတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား၊ ဆိုးတယ်လို့ပဲ ဆိုရမလား မသိဘူး။ ကျနော်ရော၊ သူရော အခုလိုမျိုး အပျော်ခရီးထွက်လာတာ ဘာဖြစ်လို့ တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မမေးကြတာပဲ။ ယွန်းက ဘာဖြစ်လို့ မမေးဘူးလဲဆိုတာ ကျနော် မသိပေမယ့် ကျနော်က မမေးတာကတော့ ဖြစ်နေနိုင်တဲ့ ပြသနာကို ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းနဲ့ တွေးမိနေလို့ …။
နေ့လည်တုန်းက သူဖုန်းပြောနေတာကို တစ်စွန်းတစ်စ ကြားထားတော့ အခုအချိန်မှာ သူတစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး တွေးလိုက်ရင် ကျနော်သဘောပေါက်ပြီလေ။ သူနဲ့ သူ့ပါတနာကြားမှာ တစ်ခုခုဖြစ်လို့ တမင်တကာ တစ်ယောက်ထဲ ထွက်လာတာ ဖြစ်ရမယ်လို့။ ဒါမျိုးကိစ္စဆိုတာ ရှေးလူကြီးတွေ ပြောဆိုဆုံးမထားသလို ကြားသုံးကြားထဲက တစ်ခုဆိုတော့ ကိုယ်ဝင်ပါလို့ မကောင်းဘူးလေ (ဒါနဲ့ အဲဒီ ကြားသုံးကြားဆိုတာရော သိကြတဲ့လူများ ရှိနေမလား မသိဘူး :D)။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်က မသိလိုက် မသိဖာသာပဲ နေလိုက်ပြီး ယွန်းပြောတဲ့ စကားတွေနားထောင်၊ ပြီးတော့ ကိုယ်ကလည်း တန်ပြန်လိုက်ပြောနေလိုက်တာ ခနအနားပေးဖို့ ရပ်ထားတဲ့ အချိန်တွေဟာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံနဲ့ ကုန်သွားမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူးရယ် ..။ (အံ့သြဖို့ တစ်ခုကောင်းတာက ပန်းတနော်မှာ signal မိပေမယ့် သူရောကျနော်ရော ဖုန်းဘယ်သူမှ မသုံးဖြစ်ဘူး .. ဒါကနောက်မှ ပြန်တွေးဖြစ်တာပါ)
ကားပေါ်ကို လူတွေ အလျှိုအလျှိုနဲ့ ပြန်တက်တော့ ကျနော်တို့လည်း အားလုံးနည်းတူ ပြန်တက်ဖို့ ပိုက်ဆံရှင်းပြီး ထိုင်ရာကနေ မထချင်ထချင်နဲ့ ထလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ မဟူရာနတ်သမီးလေးရေ .. မင်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ချောင်းသာရောက်ရင်တော့ ခနတဖြုတ် ပြန်ဆုံချင်လိုက်တာဆိုပြီး တွေးနေလိုက်တယ်။ တကယ့်တကယ်တမ်း စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ အတွေးရိုင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုမျိုး ဆူဖြိုးလှတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ရှိတဲ့ ရှမ်းမချောလေးကို ဘီကီနီ ၀တ်စုံလေး ၀တ်ပြီး မြင်ကြည့်နေတာ .. ဟီး :P(ယောက်ျားလေးဆိုတော့ ယောက်ျားလေးလိုပဲ တွေးတာ သဘာဝကျပါတယ်နော် .. ကိုယ့်ဆြာ)
တွေးမိနေတာ ဘယ်လိုပုံမျိုးဆိုတာ မသိမှာဆိုလို့ ဒုံပတ် တင်ပေးလိုက်တယ် .. ဘရိုဒွန်ဂျွန်အတွက် wink emoticon
ဒီတစ်ခါတော့ အဆင်းတုန်းကလို မဟုတ်ဘဲ ကျနော်က ရှေ့က သူက နောက်ကပေါ့ ..
ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ ခုံတန်းတွေကြားထဲက လမ်းကြားလေးအတိုင်း လျှောက်လာရင်းနဲ့ သူထိုင်ခုံနံပါတ်ရောက်တော့ နှုတ်ဆက်သလို ကျနော် တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီး ဆက်လျှောက်သွားဖို့ ပြင်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ
ကိုထွန်း .. ဆိုပြီး ခေါ်သံနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ uniqlo ဘော်ဒီဖစ်လက်ရှည်အင်္ကျီရဲ့ လက်ကို လာကိုင်တာ ခံလိုက်ရတယ်။ လည်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မျက်လွှာလေးပင့်ပြီး ကြည့်နေတဲ့ နန်းယွန်းဝေရဲ့ မျက်ဝန်းလှလှလေးကို တွေ့လိုက်တယ်။
“ခေါင်းကိုက်နေသေးတယ် ဆိုရင် .. နောက်မသွားနဲ့တော့လေ .. ယွန်းမှာ တစ်ခုံပိုနေတာ .. ကိုထွန်း အဲယားကွန်းအောက်မှာ အိပ်လို့ရတယ်ဆိုရင် ဒီမှာပဲနေလိုက်ပါလား .. ကိုထွန်းကသာ ယွန်းကို ဖြည့်ဆည်းထားတာ ယွန်းက ဘာမှ ပြန်မလုပ်ပေးရသေးဘူး”
ကျနော် ဘာလုပ်ရမလဲ … မောင်ထွန်းထွန်း .. မင်း စဉ်းစားစမ်း .. ကောင်မချောလေးတစ်ယောက်က သူနဲ့အတူ ထိုင်စီးဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေတာ ….
“ဆောရီး .. ခနလေးနော် .. ကျနော် အထဲ ၀င်ပေးပါ့မယ်”
ကျနော့်နှုတ်က ထွက်သွားတဲ့ စကားနဲ့အတူ ယွန်းရဲ့ နောက်မှာ ရပ်နေတဲ့ အတွဲလေးတစ်တွဲကို ပြုံးပြလိုက်တော့ ကောင်လေးဖြစ်တဲ့သူက .. ရတယ် ဘရို .. လို့ ပြောပြီး နားလည်တဲ့ အပြုံးနဲ့ ပြန်ပြုံးပြနေတယ် (ဒီစကားကြားတော့ ပင်လယ်ထဲက တစ်ယောက်ကိုတောင် သတိရမိသေး ;))။ သူတို့ဆီက အကြည့်လွှဲပြီး နန်းယွန်းဝေကို ကြည့်လိုက်တော့ သူ့မျက်နှာလေးက တစ်မျိုးလေးရယ်။ မျက်နက်ဝန်းလေးတွေက ပြုံးနေသလား ထင်ရတယ်။ ကျနော် သေသေချာချာ သူ့မျက်ဝန်းတွေရဲ့  အဓိပ္ပါယ်ကို ခွဲခြားနေဖို့ အချိန်မရဘူးရယ်။ နောက်မှာ လူတွေစောင့်နေတာတွေ့လို့ ကိုယ်ကလေးယို့ပေးထားတဲ့ ယွန်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အစွန်ဘက်က ခုံမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်တယ်။ စက္ကန့်ပိုင်း မခြားဘဲ ကျနော့်ဘေးမှာ သဲ့သဲ့လေးလှုပ်သွားတဲ့ လှိုင်းတစ်ခုနဲ့အတူ ကိုယ်လုံးအိအိလေး တစ်ခုက ရောက်လာတယ်။ ရင်းနှီးနေပြီဖြစ်တဲ့ သင်းပျံ့ နေတဲ့ မွှေးရနံ့လေး တစ်ခုနဲ့အတူပေါ့။ အဲဒီနောက်တော့ …
တရိပ်ရိပ်ပြေးနေတဲ့ Express Bus ကြီးနဲ့အတူ ကျနော်နဲ့ ယွန်းရဲ့ ရင်းနှီးမှုကလည်း တရိပ်ရိပ်နဲ့ ပြေးနေတယ်လို့ ပြောရမယ်။ သေချာတာကတော့ အစောတုန်းကလို ကျနော် ခေါင်းမူးတာ မရှိတော့သလို၊ အိပ်ချင်စိတ်လည်း မရှိတော့ဘူးရယ်။ မှိန်တုတ်တုတ် ထွန်းထားတဲ့ မီးရောင်အောက်မှာ တစ်ယောက်မျက်နှာကို တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း စကားတွေ ပြောလာကြတာ တခြားသူ တော်တော်များများ အိပ်ပျော်နေကြပြီဆိုတာကို တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် မရိပ်မိကြသေးဘူး။
ဒါပေမယ့် သောက်ထားတဲ့ လစ်ပတန်အရှိန်က ကျလာပြီဖြစ်တဲ့အပြင် ကားကလည်း တရိပ်ရိပ်နဲ့ မောင်းလာတာဆိုတော့ မျက်လုံးက နဲနဲမှေးချင်သလို ဖြစ်လာတယ်။ နှစ်ယောက်သားအကြား စာအုပ်တွေ၊ သီချင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေအကြောင်း ပြောလာတာကလဲ နဲနဲတော့ပစ်က ကုန်သလောက်ဖြစ်နေပြီ။ ဆက်ပြောရင် ပါဆင်နယ်ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးက ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောရတော့မှာ။ သူတော့ မသိဘူး .. ကျနော်ကတော့ မပြောချင်ဘူး။ ဘာမှ မကျန်တော့တဲ့ တစ်ညတာ အချိန်လေးကို ဒီအတိုင်းပဲ ကုန်ဆုံးသွားစေချင်တယ်လေ။ လျှိုထားတယ်လို့ရယ် မဟုတ်ပေမယ့် ဒီအကြောင်းကို ယွန်းစကားမစရင် ကိုယ်မစဘူးလို့ပဲ သဘောထားထားတာ။
“ကိုထွန်း .. ယွန်းခန မှေးလိုက်ဦးမယ် .. ယွန်းကို အားမနာနဲ့ ကိုထွန်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေ .. ခြေထောက်လည်း ဆန့်လို့ရတယ် .. လူကိုလည်း ကျုံ့ ပြီး ထိုင်မနေနဲ့ဦး .. ကိုထွန်း ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကိုယ်ကို ကျုံ့ ထားတာ ကြည့်မကောင်းဘူး”
“အိုကေ .. အိုကေ”
ကျနော်လည်း ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ တုံ့ပြန်လိုက်တော့ ယွန်းက ခွိ ခနဲ ရယ်ပြီး သူ့ရဲ့ နားကြပ်လေးကို ဗူးထဲကနေ ပြန်ထုတ်နေတယ်။ ဖုန်းမှာတပ်ပြီး နားထောင်ဖို့ သီချင်းရွေးနေတာ မြင်တော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ စပ်စုမိလိုက်တယ်။
“ယွန်း .. ဘာသီချင်းနားထောင်မလို့လဲ”
“Zayn ရဲ့  Pillow Talk ဆိုတာ .. နားထောင်ဖူးလား??”
ဗုဒ္ဓေါ .. သီချင်းကို သိတာ မသိတာထက် .. သီချင်းနာမည်ကြားပြီး လန့်သွားတာ။ Pillow Talk ဆိုတာ ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ ပြောတာထက်၊ ဘယ်သူတွေ ပြောကြတာလဲဆိုတာ သိနေပြီ။ ဘာဖြစ်လို့ ယွန်းတစ်ယောက် ဒီသီချင်းကိုမှ ရွေးပြီး နားထောင်ချင်နေလဲဆိုတာကို ကျနော် မခန့်မှန်းတတ်တော့ဘူး။ အသေးစိတ်လည်း တွေးမနေနိုင်ဘူးရယ်။ ဟင့်အင်း .. နားမထောင်ဖူးဘူးလို့ ပြောလိုက်တော့ .. ကိုထွန်း နားထောင်ချင်ရင် အတူတူနားထောင်မယ်လေဆိုပြီး နားကြပ်တစ်ဖက်တောင် ထိုးပေးနေလို့ .. အာ .. ရတယ် .. ကိုယ်ခန ငိုက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီး စကားဖြတ်ပြီး မျက်စိနှစ်လုံးကို မှိတ်ထားရတယ်။ သိပ်တော့ မထူးပါဘူး။ မျက်စိကိုသာ မှိတ်ထားရတာ။ အတွေးမြင်ကွင်းထဲမှာ မဟူရာညနတ်သမီးလေးက ကြီးစိုးနေတယ်ဆိုတာ ကျနော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ၀န်ခံလိုက်တော့မယ်ဗျာ …။
မှေးခနဲဖြစ်ပြီး ငိုက်သွားတာ ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ မသိဘူး။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကျနော့်ပုခုံးတစ်ဖက်အပေါ် တစ်ခုခု ပိလာသလို ခံစားလိုက်ရလို့ အအိပ်ဆတ်တဲ့ ကျနော် .. ဖြတ်ခနဲ မျက်လုံးနှစ်ဖက်ပွင့်သွားတော့ ယွန်းရယ် .. ကျနော့်ဘက်ကို မှီပြီး အိပ်ပျော်နေတာဗျ။ မျက်နှာဖူးဖူးဝင်းဝင်းလေးကို နီးနီးကပ်ကပ်မြင်လိုက်ရတော့ နှလုံးခုန်သံက ချက်ချင်းမြန်တက်လာပြီး မျက်လုံးက လုံးဝကို ကြည်ကြည်လင်လင် ဖြစ်သွားတယ်။ မိန်းမလှလေးတွေ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေတာဟာ သိပ်ကိုလှပတာပါလားလို့ တွေးပြီး ကိုယ်ကိုမလှုပ်ဘဲ တစိမ့်စိမ့် ကြည့်နေလိုက်မိတယ်။ (ဒီလိုမျိုး အနေအထားကို ကိုယ့်ဆြာတို့ သိကြမှာပါ .. လောကကြီးမှာ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် .. အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ မျက်နှာလေးဟာ အပြစ်ကင်းစင်ပြီး ချစ်စရာအကောင်းဆုံး မဟုတ်လား .. ယွန်းက မိန်းမချောလေးဆိုတော့ သိပ်ကို စွဲမက်ဖို့ ကောင်းနေတာလေ)
ကျနော် သေချာ သတိမထားမိလိုက်လို့ဗျ။ ကိုယ်ငိုက်ခနဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ယွန်းက သူ့မှာပါတဲ့ မွှေးပွစောင်လေးနဲ့ ကျနော်ရော သူရောကို လွှမ်းထားတာ။ စောင်ရဲ့ အနေအထားက တကယ်တမ်းတော့ တစ်ယောက်စာလေးပါ၊ အဲဒါကို နှစ်ယောက်စာ လွှမ်းထားတော့ ကိုယ်တွေကို သိပ်မလုံချင်ဘူး။ ကြည့်ရတာ ကားအဲယားကွန်းကလဲ အေးလာ၊ စောင်ကလည်း သူ့ကိုယ်လေးကို အပြည့်အ၀ မလွှမ်းထားတော့ အပေါ်ဝတ်ထုတ်မ၀တ်ထားတဲ့သူ .. အေးလာလို့ ကျနော့်ဘက် ရောက်လာတာလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ယွန်း .. ကျနော့်ကို မှီထားတာ ပြသနာ မဟုတ်ပေမယ့် စောင်လွတ်နေတဲ့ တစ်ခြမ်းက အေးပြီးချမ်းနေမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားမိပြီး ဖြေးဖြေးခြင်း သူ့ကို စောင်တစ်ထည်လုံး ခြုံပေးဖို့ မသိမသာ ပြင်လိုက်တယ်။ လက်ကို အသာလေးရွှေ့ ၊ ကိုယ်ကို မသိမသာလေး စောင်းကပ်ပြီး သူ့ကိုယ်ဟိုဘက်ခြမ်းကို စောင်ခြုံပေးဖို့အလုပ်၊ သူက အင်းခနဲ ညည်းပြီး မျက်နှာလေးကို မော့လိုက်တာ သူ့မျက်နှာနဲ့ အနီးကပ်လို ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းနဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်း အမှတ်မထင် ပွတ်တိုက်သွားပါရော .. !!!
ကျနော့် ရင်ထဲမှာ ဒိန်းခနဲ တစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်။ ချက်ချင်းပဲ မျက်နှာကို နောက်ဘက် ကမန်းကတန်း ပြန်ဆုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ခုနက ရင်ခုန်တာထက် နှစ်ဆနီးပါးလောက် ပြင်းမယ့် နောက်ထပ် ဒိန်းခနဲ (ရင်ခုန်သံ) တစ်ချက်ထပ်ဖြစ်ပါရော။ မဖြစ်ခံနိုင်ရိုးလား။ မှေးပြီး အိပ်ပျော်နေတယ်လို့ ထင်တဲ့ ယွန်းရဲ့ မျက်နက်ဝန်းလေးတွေက ဖြတ်ခနဲ ပွင့်လာတာကိုး။
ကျနော်ဗျာ .. ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိတော့ဘူး။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ နမ်းမိလိုက်ပြီ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယုံကြည်လို့ သူ့အနားကို ခေါ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို။ ဒါဟာ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်တာပဲ။ ကျနော် မကောင်းဘူး။ အထင်မလွဲအောင် ရှင်းပြမှ ဖြစ်တော့မယ် ..
“ယွန်း ... ဟို .. ကိုယ် .. ကိုယ်လေ .."
ထစ်အထစ်အနဲ့ စကားလုံးတွေ အပြေးအလွှားလိုက်ရှာနေရတဲ့ ကျနော့်ကို ယွန်းက ရီဝေေ၀လေးနဲ့ စူးစိုက်ကြည့်ပြီး ထင်မှတ်မထားတာ တစ်ခုကို ပြုလိုက်လုပ်တယ်။ တခြားတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ပေါ်လွှမ်းထားတဲ့ စောင်လွတ်နေတဲ့ လက်ရဲ့ လက်ညိုးလေးနဲ့ ကျနော့် ပါးစပ်ရှေ့မှာ ကပ်ထောင်ပြီး လှမ်းပိတ်လိုက်တာ။ ပြီးတော့ ခေါင်းကို သာသာလေး ဘယ်ညာတစ်ချက် ခါပြတယ်။ ရှင်းပြစရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့သဘော ...။
အဲဒီနောက် ယွန်းနဲ့ ကျနော် မျက်တောင်မခတ်တမ်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကြည့်မိနေကြတယ် ..
တိုင်ပင်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြိုင်တူလိုလို တစ်ယောက်မျက်ဝန်းထဲက အဓိပ္ပါယ်ကို တစ်ယောက်က နားလည်သွားတယ်။ ယွန်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးဟာ မော့လိုက်တဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့အတူ ရှေ့ကို ရောက်လာသလို၊ ခေါင်းငုံ့ပြီး ရှေ့တိုးလိုက်တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကလည်း အဲဒီနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးပေါ် အမိအရကို ကျရောက်သွားတယ်။ မွှေးပျံ့ နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီနံ့လေး ရှိနေတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေဟာ နူးညံ့လွန်းလို့ နမ်းလို့ကို မ၀နိုင်ဘူးရယ်။ အပေါ်နှုတ်ခမ်းလေးကလည်း အပေါ်နှုတ်ခမ်းလေးမို့၊ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကလည်း အောက်နှုတ်ခမ်းလေးမို့ ဘယ်ဟာမဆို နမ်းလို့ကောင်းနေတယ်။ နောက်ဆုံး နှုတ်ခမ်းပါးလေးနှစ်ခုစလုံးကို ငုံပြီး စုပ်နမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့( အင်းးးး) ဆိုတဲ့ အသံလေး ထွက်လာပြီး ယွန်းရဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေက မှိတ်သွားတာတွေ့တယ်။
နူးညံ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းလွှာလေး နှစ်ခုရဲ့ ကြားကနေ လျှပ်စစ်လှိုင်းတွေလိုမျိုး ရင်ခုန်သံလှိုင်းတွေ အပြန်အလှန် စီဆင်းနေကြတယ်ဆိုတာကို ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်တဲ့ ဖော်မျူလာရှိရင် အဲဒီဟာအတွက် သက်သေပြဖို့ ကျနော်နဲ့ ယွန်းကို volunteer လုပ်ခွင့်ပေးပါတော့ ... ။
ပြောမပြနိုင်အောင် ဆွတ်ပြန့်ကြည်နူးဖွယ် ကောင်းတဲ့ အရသာဟာ နှစ်ယောက်သားကို ကြီးစိုးထားတော့ တဒင်္ဂအခိုက်အတန့်မှာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ Express ကားကြီးပေါ်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ မသိတော့ဘူး။ ရင်ခုန်သံလှိုင်းတွေရဲ့ ခေါ်ဆောင်ရာနောက်ကနေ ကမ္ဘာဦးအစမှာ ရှိတဲ့ ဧဒင်ဥယျာဉ်ကြီးထဲကို ရောက်သွားပြီး နှစ်ယောက်သား အတူ ပြေးလွှားနေတာနဲ့တောင် တူနေရဲ့  ...
ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်တာပါပဲ။ လူတွေကသာ မပြေးလွှားချင် ပြေးလွှားနေမှာ ... အခုအချိန်မှာ ယွန်းက ကျနော့်ကို တန်ပြန်စုပ်နမ်းလာယုံမက သူ့လျှာလေးကပါ ပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်လာတော့၊ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် လျှာချင်း အပြေးအလွှား လုပ်နေကြတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဆြာတို့ လက်ခံလိုက်ပါနော် …။
ပြောရင် ယုံကြမလား မသိဘူး။ ယွန်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးက တအားနမ်းလို့ ကောင်းတာ။ မိန်းကလေး တော်တော်များများကို ကျနော် နမ်းဖူးပါတယ်။ တစ်ချို့ နှုတ်ခမ်းတွေက နမ်းလို့ မကောင်းဘူး။ ဖွာတယ်ဖွာတယ်နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေရှိတယ်။ တစ်ချို့ကြတော့လဲ ခံတွင်းနံ့ မကောင်းလို့လားမသိဘူး။ Mint ငုံထားတာ မဟုတ်ရင် နမ်းလို့မကောင်းဘူး။ ယွန်း ကျတော့ ဒါမျိုး မဟုတ်ဘူးရယ်။ မွှေးတေးတေး နှုတ်ခမ်းနီနံ့ လေးမှာ သောက်ထားတဲ့ လစ်ပတန်အရသာ အကြွင်းအကျန်လေး ကပ်နေပြီး၊ သူ့ပင်ကိုယ် နူးညံ့အိစိုတဲ့ အရသာက တွဲကပ်ပါနေတာ။ အဲဒါကြောင့်လား မသိဘူး ကျနော့်မှာ first base ကနေ မတတ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ဒါပေမယ့် ကြာလာတာနဲ့အမျှ နမ်းနေရင်းနဲ့ ကျနော် စိတ်ထလာပြီး အနမ်းတွေက တအားကို အားပါလာရော။ အဲဒီမှာ ပြွတ်ခနဲ မြည်သံနဲ့အတူ ကျနော့်နဲ့အတူ အပြိုင်နမ်းနေရာက သူ့ခေါင်းကို ဖယ်ပြီး နောက်ဆုတ်သွားတယ်။ ရီဝေေ၀နဲ့ ပြန်ပွင့်လာတဲ့ မျက်လုံးလေးနဲ့ ကျနော့်ကို အားနာသလို ကြည့်ပြီး ဘာပြောသလဲဆိုတော့
(ကိုထွန်း .. တအား မစုပ်နဲ့နော် .. ယောင်သွားမှာစိုးလို့).. တဲ့
ကျနော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလဲ ဒါမျိုးရမလား။ နှုတ်ခမ်း မနမ်းရ .. ကျန်တာနမ်းတယ်ကွာ ဆိုပြီး ပါးမို့မို့လေးတစ်ဖက်ကို နမ်းပစ်လိုက်တာပေါ့ .. (အာကွာ)ဆိုတဲ့ အသံလေး မတိုးမကျယ်နဲ့ ကြားရပြီး အပေါ်က မိုးလာသလိုဖြစ်တဲ့ ကျနော့် လည်တိုင်ကို သူ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့ သိုင်းဖက်လာပါရော။ တစ်လစ်ထုတ်ထားတဲ့ ကျနော့်လျှာဟာ နူးညံ့နေတဲ့ ရှမ်းမချောလေးရဲ့ ပါးပြင်ပေါ်မှာ တရွတ်တိုက်ဆွဲ ပြေးသွားရင်း၊ ကြယ်ပုံစံ နားဆွဲလေး ရှိနေတဲ့ နားရွက်ဖောင်းဖောင်းလေးဆီ ရောက်သွားတဲ့အါ (အဟင်းဟင်းးးး) ဆိုတဲ့ ညည်းသံလေးတွေနဲ့ ကျနော့်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တိုးဖက်လာပြန်တယ်။
နားသံသီးလေးရှိတဲ့ နေရာလေးကို နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုနဲ့ ဖိညှပ်ပြီး အစိလေးကို စုပ်သလို စုပ်ပေးလိုက်တော့ ယွန်းရဲ့ ကိုယ်ကလေးက ကော့သထက်ကော့လာတာ သူ့ရဲ့ နို့လုံးလုံးတွေနဲ့ ကျနော့်ရင်အုံ ပွတ်တိုက်မိနေပြီ။ ကျနော်လည်း အခုအချိန်မှာတော့ စိတ်ထဲမှာ ရမ္မက်လှိုင်းလေးတွေ တအားကို ထန်နေပြီ။ ကားပေါ်မှာတွေ ဘာတွေ တွေးမနေတော့ဘူး။ ကိုယ်ချင်းပူးကပ်နေတဲ့ ယွန်းရဲ့ ကျောနောက်ကိုလက်တစ်ဖက်ထိုးထည့် ဖက်ထားရင်း၊ ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်က မို့ဝန်းတဲ့ နို့လေးတစ်ဖက်ကို လက်ရဲဇက်ရဲပဲ ကိုင်ပစ်လိုက်တယ်။
(အင့်) ခနဲ ညည်းသံနဲ့အတူ ယွန်းရဲ့ ကိုယ်ကလေး ဆတ်ခနဲတုန်သွားတယ်။ ကျနော်ပုခုံးပေါ်မှာ သူ့မျက်နှာလေးက ရောက်နေလေတော့ ယွန်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ကျနော့်နားတစ်ဖက်က ကပ်နေသလို ဖြစ်နေတာလေ။ ဒီတော့ သူမ တိုးတိုးလေး ညည်းပေမယ့် ကျနော့်နားထဲမှာ အကျယ်ကြီး ကြားနေရသလို၊ အဲ့လို ကြားနေရတာကလဲ ကျနော့်စိတ်တွေကို ပိုပိုပြီး တက်ကြွစေအောင် ပြုလုပ်ပေးနေတာပေါ့။
လက်ထဲမှာ မိမိရရ ကိုင်ထားတဲ့ နို့လေးတစ်ဖက်ကို ညင်ညင်သာသာလေးပဲ ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ် .. ကျနော်ထင်ထားတာ မှန်တယ်။ အခုအခံကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ ဘရာအသားက ခပ်ပျော့ပျော့လေးဆိုတော့ တင်းရင်းမွတ်ထွတ်နေတဲ့ နို့လုံးလေးကို တိုက်ရိုက်ကိုင်မိတာနဲ့တောင် တူနေတယ်။ ဖြေးဖြေးခြင်း လက်ကို ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့  .. ဟိုစမ်းဒီစမ်းလုပ်ပြီး နို့သီးခေါင်းရှိမယ့်နေရာလေးကို မှန်းရှာလိုက်တော့၊ မာတောင့်တောင့် အရာလေးတစ်ခုကို စမ်းမိပါရော။ ဟုတ်ပြီကွာဆိုပြီး လက်ညိုးလက်မနှစ်ခုကြား ရအောင် ညှပ်ကိုင်ပြီး ဖွဖွလေး လှိမ့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ
(အား … ဟင်းးးး … ကို .. ကိုထွန်း)
ဆိုပြီး တုန်ရင်နေတဲ့ အသံလေးနဲ့ သူ့နို့ကို ကိုင်ထားတဲ့ ကျနော့်လက်ကို အပေါ်ကနေ လာအုပ်ကိုင်ပါရော။ နို့ကို ကိုင်မိထားတဲ့ လက်ကိုတော့ မဖယ်ပေးနိုင်ဘူး။ ယွန်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာ သိချင်လို့ ဆက်တော့ မနယ်ဘဲ၊ မျက်နှာချင်းလည်း ပြန်ခွာပြီး သူ့မျက်ဝန်းတွေကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့၊ လိင်စိတ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ မိန်းကလေးတွေ ကြည့်တတ်တဲ့ အကြည့်မျိုး မျက်ဝန်းလေး မှေးတေးတေးနဲ့ ကျနော့်ကို ပြန်ကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ သူ့နို့လေးကို ကိုင်ထားတဲ့ ကျနော့်လက်ကို သာသာလေး အုပ်ကိုင်ပြီး ဖယ်ပစ်လိုက်တယ် …
သွားပြီ .. ဆြာ !! .. ကျနော်တော့ ဂွမ်းပြီ .. နမ်းတာက ပြသနာမရှိပေမယ့် .. first base ကနေ ကူးပြောင်းဖို့ ယွန်းက လက်မခံဘူးပေါ့ .. လူကို တော်တော်ဆွေးသွားတယ်
ဒါပေမယ့် အဲဒီ ခံစားမှုက ခဏလေးပါပဲ .. ဆွေးသွားတဲ့ ခံစားမှုကို၊ ပျော်ရွှင်လှိုက်မောတဲ့ ရင်ခုန်သံတွေက ၁၀ပေလာက် မြင့်မယ့် လှိုင်းလုံးကြီးတွေလိုပဲ အပြတ်အသတ်ကို တိုက်ချပစ်လိုက်တယ်။
ကျနော့်လက်ကို အုပ်ကိုင်ပြီး ဖယ်ပစ်တာ မဟုတ်ဘူး။ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်းက သူမရဲ့ ပေါင်တံနှစ်ဖက်ကြားထဲကို ပို့ပစ်လိုက်တာဗျ …
ပြီးပြီးရော မဟုတ်ဘူးနော်။ ဂါဝန်အောက်ကို လက်ထိုးထည့်ပြီး အုပ်ကိုင်ခိုင်းတာ။ ဖောင်းမို့နေတဲ့ အဖုတ်ဟာ အသားကပ်ဘောင်းဘီလေး တစ်ထပ်ခံနေသည့်တိုင် လက်ထဲမှာ ပူနွေးနေတာ ဖိုကထုတ်တဲ့ မုန့်ပေါင်းလို တရှိန်းရှိန်းနဲ့ အငွေ့တွေထွက်နေသလား ထင်ရတယ်။ ကျနော်လည်း ဘာရတော့မလဲဗျာ။ လက်ဝါးကို ပက်လက်လှန်ထားရင်း မိမိရရ အုပ်ကိုင်ပြီး တစ်ချက်ညှစ်ပစ်လိုက်တော့ အင်းခနဲ မြည်သံနဲ့ သူ့လက်က ကျနော့်လက်ပေါ်က ကွာသွားတယ်။ လူက လျော့တိလျော့ရဲ အနေအထားနဲ့ ထိုင်ခုံနောက်ကျောကို မှီထားပြီး ပေါင်တန်ပြည့်ပြည့်လေးနှစ်ဖက်ကိုတော့ ကျနော့်လက် လှုပ်ရှားလွယ်အောင် ထပ်ကားပေးလေရဲ့  …။
“ယွန်း .. ဘောင်းဘီလေး အသာချွတ်လိုက်မယ်နော် ..”
တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက် အဖုတ်နွေးနွေးလေးကို ပွတ်ပေးပြီးနောက် အားမရနိုင်တဲ့ ကျနော်က တိုးတိုးလေး သူ့နားနားကပ်ပြောလိုက်တော့၊ မျက်လုံးလေး ပိတ်ထားလျက်နဲ့ အင်းးး ဆိုပြီး ပြန်ဖြေတယ်။ တင်သားလုံးလုံးလေးတွေကိုလည်း ထိုင်ခုံနဲ့ လွတ်အောင် ကြွပေးတာနဲ့ ကျနော်လည်း ဂါဝန်အောက်ကို လက်နှစ်ဖက်လုံး ထိုးထည့်၊ အသားကပ်ဘောင်းဘီကို ပေါင်တန်အလယ်လောက်ရောက်အောင် လိပ်ချ၊ အဆင်ပြေတာနဲ့ လက်ကိုအထဲ ပြန်ထည့်၊ ပြေကျတော့မလို ဖြစ်နေတဲ့ စောင်ကို အပေါ်ကနေ ပြန်လွှား .. လုပ်စရာရှိသမျှကို ဆက်တိုက်ကို လုပ်ပစ်လိုက်တော့တယ် .. ဒါမျိုးဆိုတာ ဘာပြီးရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိနေတဲ့ ကျနော့်အတွက်တော့ မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာ ပင်တီပါးပါးလေးသာ ကျန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ယွန်းရဲ့ အဖုတ်လေးပေါ် လက်ပြန်ရောက်သွားတော့တာပဲ။ ပင်တီကတော့ တမင်တကာ မချွတ်တော့တာ။ လက်နဲ့ စမ်းမိသလောက် ဇာပင်တီပါးပါးလေးပဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိနေလို့။ ကိုယ့်ဆြာတို့ သိကြမှာပါ။ အဖုတ်အကွဲကြောင်းနေရာလေးမှာပဲ ဖဲသားလို ပြောင်ချောလေးပါပြီး ကျန်တဲ့နေရာတွေအားလုံးက ဇာပန်းအပြောက်ပြောက်တွေနဲ့ ပင်တီသေးသေးလေးတွေကို၊ ဒါမျိုးက တကူးတက ချွတ်နေဖို့ မလိုဘူးရယ်။ နောက်ပြီး ကျနော်တို့ အနေအထားက ကားကြီးပေါ်မှာ .. တစ်ခုခုဆို အဆင်ပြေအောင် ဒီအတိုင်းထားတာ ကောင်းတယ် မဟုတ်ဘူးလား ..။
အဲ .. ဒီအတိုင်းမထားတာကတော့ အဖုတ်အိအိလေးကို ပြန်ကိုင်မိသွားတဲ့ ကျနော့်လက်က လက်ချောင်းလေးတွေကိုပဲ။ အဖုတ်အကွဲကြောင်း တလျှောက် အစုန်အဆန် ပွတ်ပေးတယ်၊ ဒါက ပထမအဆင့် .. နောက်တော့ ပင်တီလေးကို မသိမသာ ဘေးကိုတွန်းရွှေ့ ပြီး လုံးဝကြီး အကာအကွယ်မဲ့သွားတဲ့ အဖုတ်ဝလေးကို သွားရန်ရှာတယ်။ တစ်ခုကောင်းတာက ယွန်းက ကျနော်နဲ့ နမ်းနေရင်းနဲ့ကို စိတ်ထနေတော့ သူ့အဖုတ်လေးက အရည်တွေစိုနေပြီ။ ကျနော့်လက်ခလယ်လေး ထိုးထည့်ပြီး ကလော်ကလော်ပေးတော့ လက်ခလယ်တလျှောက် စီးကျလာတဲ့ အရည်တွေဆိုတာ အများကြီးပဲ ..
အကြာကြီး မလုပ်လိုက်ရပါဘူး .. အသက်ရှူသံတွေ တအားမြန်လာ၊ ယွန်းကိုယ်လေးက တုန်တုန်ရီရီဖြစ်လာပြီး တစ်ချက်မှာ ကျနော့်လက်ကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖိအုပ်ထားရင်း တကိုယ်လုံးကော့တက်သွားတယ်။ ကားထားတဲ့ ပေါင်တန်နှစ်ချောင်းက ဆတ်ခနဲ ပြန်ပူးကပ်သွားပြီး တင်းတင်းညှပ်ထားတာ ကျနော့်လက်တောင် လုံးလုံးလှုပ်လို့ မရတော့ဘူး …
“ဟူးးးးး … လူကို ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်း မသိဘူး .. ကိုထွန်းရယ်”
တအောင့်လောက်ကြာလို့ ကျနော့်လက်ကို ပြန်ထုတ်လို့ရတဲ့ အချိန်မှာ .. ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ ယွန်း တိုးဝင်လာပြီး မျက်နှာလေးမော့ရင်း ပြောတာ။ ပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား အောက်ပိုင်းကို လွှမ်းထားတဲ့ စောင်အောက်ကနေ သူ့လက်ကလေးက ကျနော့်ရဲ့ ပေါင်ရင်းဂွကို ရောက်လာပါရော။ ပြောပြစရာ မလိုလောက်အောင် တင်းမာနေလို့ ၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီသားကို ကုန်းထောက်နေတဲ့ ကျနော့်ကောင်ကို စမ်းမိသွာတာနဲ့ .. အပြင်ထုတ်လိုက်လေဆိုပြီး တိုးတိုးလေးပြောတော့ … ဒီကကောင် အီဖေကိုယ်က .. လာထား ကြာသလားပေါ့ဆိုပြီး .. ဇစ်ကို ဆွဲဖစ်မယ်အပြု !!!
တင်းတောင် .. တင်းတောင်ဆိုတဲ့ အချက်ပေး တီးလုံးနဲ့အတူ ကားတစ်စီးလုံးမှာရှိတဲ့ မီးတွေပွင့်လာပါရော …
သောက်ပလုတ်တုတ် .. အချိန်တွေ ဘယ်လောက်ကြာသွားမှန်း မသိတာ .. ချောင်းသာသွားရင် မလွဲမသေဖြတ်ရတဲ့ ဥတိုချောင်းကို ရောက်လာတာ။ ကျနော်တို့ ခရီးသွားတဲ့ ဒီအချိန်ကြီးမှာ အခြေအနေ အကြောင်းမလှတော့ တစ်လမ်းသွားတံတားကို၊ နှစ်လမ်းသွားဖြစ်အောင် လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စက မပြီးသေးဘူး။ ချောင်းဟိုဘက်ကို မော်တော်ဘုတ်နဲ့ ကူးဖို့ ကိုကံကောင်းက ထကြေငြာတာ ..
လခွီးနဲ့မှပဲ .. ကျနော့်မှာ ဘယ်သူ့ကို ဆဲလို့ဆဲရမှန်း မသိဘူး .. ယွန်းကတော့ စူပုတ်နေတဲ့ ကျနော့်မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး ရယ်ကျဲကျဲ မျက်နှာပေးလေး လုပ်နေသေးတယ် .. သောက်ကောင်မလေး .. ရယ်ထားဦးပေါ့ .. တွေ့မယ် .. ခွီး
ကဲ .. ကျန်တဲ့အခန်းတွေတော့ နဲနဲ ကျော်ချလိုက်တော့မယ် .. ဖီလင်လာလို့ ရေးနေရင်း ရေးနေရင်းနဲ့ တော်တော်ရှည်သွားပြီ။ အတိုချုံးပြီး ပြောရရင် ကျနော်တို့နှစ်ယောက် မော်တော်ပေါ်ရောက်သွားတယ်။
မော်တော်ပေါ်ကိုတက်တော့၊ ကျနော်က အရင်တက်ပြီးမှ သူ့လက်ကလေးကို ဆွဲခေါ်တင်လိုက်တာ။ နောက်ပြီး ထိုင်ဖို့နေရာပြင်တော့ မော်တော်ကြမ်းပြင်က ညစ်ပတ်နေလို့ ကျနော်က ပါလာတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကို ခင်းပေးမယ်ဆိုတော့ ရတယ်ဆိုပြီး ကျနော့် တင်ပလွေထိုင်ထားတဲ့ ပေါင်ပေါ်ပဲ သူက တက်ထိုင်တာ။ မော်တော်အထွက်မှာ နဲနဲလေး လှုပ်သွားတော့ သူက ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲမှီထားလို့၊ ကျနော်က နောက်ကနေ သူ့ကိုယ်လေးကို ဖက်ထားတာ ..။
အဲဒါတွေကိုတော့ ပြောလည်းပြောချင်တယ် .. ပြောလည်း ပြောလိုက်ပြီပေါ့ဗျာ .. ဟီး wink emoticon wink emoticon
ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ညလေတဟူးဟူးတိုက်နေတဲ့ ဥတိုချောင်းရဲ့ ညင်သာတဲ့ ရေစီးထဲမှာ ကျနော်တို့ လိုက်ပါလာတဲ့ မော်တော်လေး တငြိမ်ငြိမ့်နဲ့ ခုတ်မောင်းနေစဉ် .. ဘယ်သူ့ဖုန်းကဖွင့်ထားမှန်း မသိတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ အသံက ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စီ ရောက်လာလို့ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်တောင် ပြိုင်တူ ကြည့်မိကြသေးတယ် ..
သီချင်းလေးထဲက စာသားလေးတွေက ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်သလို ဖြစ်နေတာကိုးဗျ
အာဒမ်ဟာ နင်မဟုတ်သလို .. ဧ၀ဟာ ငါမဟုတ်ပါ .. သို့သော် မင်းနဲ့ငါ .. အချစ်တို့ကို တွေ့ပြီ .. ဧဒင်က ပန်းသီးကို တို့နှစ်ယောက် ခူးယူမစားပါ .. သို့သော် မင်းနဲ့ငါ .. အချစ်တို့ကို တွေ့ပြီး ရေး …
There are three apples that changed the world ဆိုပြီး ပြောနေကြတဲ့ quote အတိုင်းသားဆိုရင်တော့ ကျနော့်ဘ၀ကို လတ်တလောအခြေအနေမှာ ပြောင်းလဲသွားစေတာက သူတို့ဆိုထားသလို Steve Jobs ရဲ့  apple မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ် ..
အာဒမ်နဲ့ ဧ၀တို့ နှစ်ယောက် မစားသင့်ဘူးဆိုပြီး တားမြစ်ထားတဲ့ ပန်းသီးကို ခိုးစားခဲ့ကြသလို၊ ကျနော်နဲ့ ယွန်းလည်း ဖြတ်မကျော်သင့်ဘူး ဆိုတဲ့ စည်းတစ်ခုကို ကျော်ခဲ့ပြီလေ။ ဒါမျိုးဆိုတာ ဖြစ်မသွားခင်ကသာ ထိန်းသိမ်းရတာ၊ လွန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ချက်ချင်း U Turn လိုက်ရှာပြီး ပြန်ကွေ့လို့ရတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူ တော်တော်များများ သဘောပေါက်ကျမှာပါ။
ကမ္ဘာမြေရဲ့ ဆွဲအားကို နယူတန်က ပန်းသီကြွေတာကို ကြည့်ရင်း စဉ်းစားသွားမိတာဆိုပေမယ့် ကျနော်ကတော့ အချစ်ရဲ့ ဆွဲအားကို ယွန်းကိုယ်လေးက ကျနော့်အပေါ်မှာ ပိပြီးထိုင်နေတာကို ခံစားရင်းနဲ့ လက်တွေ့သိသွားတာဗျ ..
အဲ .. အဲဒီအခြေအနေမှာလည်း တတိယမြောက် နောက်ဆုံးပန်းသီးလေးကို သာယာသွားမိတာလေ။ တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ apple-shaped လို့ ပြောရမယ့် ယွန်းရဲ့ တင်အိုးလှလှလေးက ကျနော့်ရဲ့ ပေါင်ခွကြားကို မိမိရရ ဖိထားတာ မဟုတ်လား။ ဒီကြားထဲ .. အဲဒီဟာမလေးက ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ မှီထိုင်ထားရင်း ငြိမ်ငြိမ်လေး လိုက်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ လက်တစ်ဖက်ကို နောက်ပြန်ထောက်ထားသလိုနဲ့ သူ့တင်ပါးကို ထိနေတဲ့ ကျနော့်ကောင်ကို ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ မသိမသာနဲ့ ပွတ်ပေးနေသေးတာ။ တော်သေးတယ်။ ကျနော် ၀တ်ထားတာ ဂျင်းဘောင်းဘီဖြစ်တဲ့အပြင်၊ အထဲက အတွင်းခံကလည်း ဘောက်ဆာဖြစ်နေလို့ .. မဟုတ်ရင် ညီလေးထိပ်က ထွက်တဲ့အရည်နဲ့ ဂွကြားမှာ အကွက်လိုက် ဖြစ်နေမှာ ...။
ဥတိုချောင်းရဲ့ ဟိုဘက်ရောက်တဲ့အခါ တဆင့်ပြောင်းစီးရမယ့်ကားက အဆင်သင့်ရှိနေတော့ သိပ်မစောင့်လိုက်ရဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ ချောင်းသာရောက်ဖို့က ဘယ်လောက်မှ မကျန်တော့တာရော၊ လူတွေအားလုံးကလည်း နိုးနေတာကြောင့်ရော၊ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် တူယှဉ်တွဲပြီး ထိုင်လို့ရပေမယ့် ဘာမှ ဟုတ်တိပတ်တိ မလုပ်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုံးဝကြီး မတို့မထိတာတော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ အတို့အမြုပ်လေးတွေတော့ ရှိတာပေါ့ဗျာ။ ယွန်းက သူ့အောက်နှုတ်ခမ်းလေး တစ်ဖက်ကို သွားလေးနဲ့ ဖိကိုက်ရင်း၊ ဖီးလ်လာသလို မျက်နှာပေးနဲ့ သူ့နို့လေးတစ်ဖက်ကို အခြားသူတွေမမြင်အောင် မသိမသာ ညှစ်ပြတာ။ ဘောင်းဘီကို ချွတ်တာမဟုတ်ပေမယ့် ဇစ်ကိုဆွဲဖွင့်ထားရင်း အထဲကို လက်ထိုးထည့်ပြီး ကျနော့်ကောင်ကို စမ်းကြည့်တာ။ ဒါမျိုးတော့ လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ ..
"ကဲ .. အားလုံးပဲ .. ကျနော်တို့ကား သွားမယ့် လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်တွေကို ကြေငြာပါ့မယ် .. ကိုယ်ဆင်းရမယ့် ဟိုတယ်ပါရင် ပြောပါ"
မိုက်ကရိုဖုန်းက ထွက်လာတဲ့ ကိုကံကောင်းရဲ့ အသံဟာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်အတွက် ခွဲခွာခြင်းကို သယ်ဆောင်လာသလားတောင် ထင်ရတယ်။ တစ်လမ်းလုံး၊ တစ်ညလုံးမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မမေးဖြစ်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကို နှစ်ယောက်သား လေးလံတဲ့ လေသံနဲ့အတူ ပြိုင်တူ မေးမိကြတယ်
"ဘယ်ဆင်းမှာလဲ .. ယွန်း"
"ဘယ်ဆင်းမှာလဲ .. ကိုထွန်း"
"အယ် .. တကယ် !! .. ယွန်းလဲ အတူတူပဲ"
ရေစက်ဆိုတာ အလကားပြောကြတဲ့ စကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူရောကိုယ်ပါ လက်ခံသွားသလို၊ နှစ်ယောက်သား မျက်နှာဟာလည်း အတူတူ ၀င်းလက်သွားတယ်။
ဟိုတယ်ရှေ့မှာ ကားရပ်လိုက်တော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဆိုသလို၊ ကားပေါ်က ဆင်းလာတာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ထဲပဲ ရှိတယ်။ ဟုတ်လှချည်လားလို့ ကျနော့်စိတ်ထဲက တွေးပြီး ယွန်းနဲ့အတူ ခပ်တည်တည်ပဲ လျှောက်လှမ်းဝင်လာတော့ Reception ကို ရောက်တဲ့အခါမှာ ဧည့်သည်တွေ တစ်ယောက်စ၊ နှစ်ယောက်စပဲ ရှိတယ်။ ယွန်းရယ်၊ ကျနော်ရယ်က အိတ်တစ်လုံးစီပဲပါလို့ ကျနော်က ကျော့ပိုးအိတ်ကိုလွယ်၊ သူက သူ့အိတ်ကိုလွယ်လျက်သားပဲ ကောင်တာနား တိုးကပ်သွားတော့ ညတာဝန်ကျတဲ့သူ ဖြစ်ပုံရတဲ့ ကောင်မလေးက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေးပဲ စတင်နှုတ်ဆက်တယ်။
"မင်္ဂလာပါရှင် .. ဘွတ်ကင်များ တင်ထားလား မသိဘူး"
"ဟုတ်ကဲ့ .. နန်းယွန်းဝေဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ပါ"
"ဟုတ်ကဲ့ .. ဒါဆို နှစ်ယောက်အတူတူ ချက်ကင်ဝင်မှာပေါ့နော် .. အခန်းမှာ လူရှိနေသေးတော့ ..."
"မဟုတ်ဘူးဗျ .. တစ်ယောက်စီ!!"
စာရင်းစာရွက်မှာ မှတ်ထားတာကို ကြည့်ပြီး သွက်သွက်လက်လက် ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ ကောင်မလေး စကားမဆုံးခင်မှာ ကျနော် ကြားဖြတ်ပြီး ၀င်ပြောလိုက်ရတယ်။ အခြေအနေက မပြောမဖြစ်တဲ့ အနေအထား ရောက်သွားပြီလေ။ ကျနော်နဲ့ ယွန်းတွဲလာတာကိုကြည့်ပြီး နှစ်ယောက်အတူတူ ချက်ကင် ၀င်မယ်လို့ တွက်ထားလိုက်ပုံရတယ်။
"ကျနော်နဲ့ သူနဲ့က လမ်းရောက်မှ ခင်သွားကြတာပါ .. ကျနော်က တစ်ရက်နောက်ကျပြီး ချက်ကင်ဝင်တာပါ .. အခန်းနံပါတ် ၃၀၁ sea view ကပါ .."
"အာ .. ဆောရီးရှင့် .. တောင်းပန်ပါတယ် .. ကျမ ပြန်ကြည့်ပေးပါ့မယ်"
အားတုံ့အားနာဟန်လေးဟာ ညာဘက်ပါးပြင်မှာ မှဲ့နက်လေးတစ်လုံးရှိတဲ့ ဧည့်ကြိုကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာမှာ အထင်းသားပေါ်လွင်သွားတယ်။ ဇက်ကလေးနိမ့်ပြီး ခေါင်းလေးညွှတ်ပြလိုက်တဲ့ ကောင်မလေးကို ကြည့်ပြီး ဒါဟာ သူ့အမှားမဟုတ်ဘူး .. သူ့နေရာမှာ ကျနော်ဆိုလဲ ဒီလိုမျိုးတွေးမှာဆိုတာ သဘောပေါက်နေတော့
"ရတယ် .. ညီမ .. ပြသနာမရှိဘူး .. ယွန်းနဲ့ ကျနော်နဲ့က ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်နေပါပြီ ...ဟုတ်တယ်နော် ယွန်း .. အဟင်း ဟင်း"
ခပ်ပေါ့ပေါ့ ရယ်သံလေးနဲ့ အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီး၊ ဘေးနားကပ်ရပ်နေတဲ့ ယွန်းကိုပါ ပုခုံးတစ်ဖက်နဲ့ တိုက်ပြလိုက်တော့ .. ဟင်းနော် .. ဆိုတဲ့ မျက်စောင်းလှလှလေးက ကျနော့်ဆီ ဒိုင်းခနဲ ရောက်လာတာပေါ့။ ဒီလိုမျိုး အဖြစ်အပျက်တွေကို တော်တော်များများ ကြုံတွေ့မြင်ဖူးထားပုံရတဲ့ ညိုချောလေး ချောတဲ့ ဧည့်ကြိုကောင်မလေးကလည်း အခုကျမှကျနော့်တို့နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ပြီး မျက်နှာလေး ပြုံးသွားတယ်။
အလဲ့ .. ပြုံးလိုက်တော့ .. ဒီကောင်မလေးက ညာဘက်ပါးပြင်မှာ ပါးချိုင့်လေးနဲ့ကိုး .. ချစ်စရာလေးဗျ ..။ အကျင့်ပါနေတဲ့ ကျနော့်မျက်လုံးတွေက ကြံရည်ရောင် ၀န်ထမ်းဝတ်စုံလေးရဲ့  ညာဘက်ခြမ်းက ခပ်မို့မို့တောင်ပူစာလေးအထက်မှာ ရှိတဲ့ ရင်ထိုးလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ ၀ါဆိုဦးတဲ့။ ဆိုးတော့ မဆိုးဖူးဘူး။ မိုးတစ်လုံးပဲ လိုနေတော။ အနေအထားကတော့ အင်တာနက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ သူမသာ ကိုယ်မသာပဲ။ အရပ်ကလေးကလည်း ယွန်းလိုပဲ မနိမ့်မမြင့် အနေတော်လေး။ အလုံးအထည်သာ သူက နဲနဲ ပိန်ပိန်ပါးပါး ဖြစ်နေတာ ...
(ဟိုက် .. ငါ ကြည့်နေတာ သိသွားပါလား !!)
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် မျောပြီးတော့ နာမည်လေးပေါ်နေတဲ့ ရင်ထိုးနေရာလေးကို တစိုက်မက်မက် ကြည့်နေမိတဲ့ ကျနော်၊ ၀ါဆိုဦးက ယွန်းထံကနေ မှတ်ပုံတင်ယူပြီး ကျနော့်ဘက်လှည့်လိုက်ချိန်မှာ လူမိသလို ဖြစ်သွားတယ်။ ရှက်လိုက်တာဗျာ .. ဘေးနားမှာ ကိုယ့်နဲ့ဘာညာသရကာ ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်မချောလေး တစ်ယောက်ကို ထားပြီး၊ နောက်ထပ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်အုံကို ငေးကြည့်နေမိတာ။ ဒီဘဲကတော့ နှာဘူးကောင်လို့ပဲ ထင်သွားပြီ ထင်ပါရဲ့ ဆိုပြီး တောင်းပန်သလို ၀ါဆိုဦးရဲ့ မျက်နှာလေးကို ခပ်ဖျော့ဖျော့ အမူအရာနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ .. ဟိုက် ရှားဘား ... သူက ကျနော့်ကို မျက်တောင်လေးတွေ ခပ်လှန်လှန်ထားပြီး ပြန်ကြည့်နေတာ။ ဒီအကြည့်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ကျနော် သိတယ် .. မဟုတ်သေးဘူး .. ကျနော် ဒီလောက် ကံကောင်းတတ်တဲ့ ကောင် မဟုတ်ဘူး ... စိတ်ထင်လို့ ဖြစ်မှာပါလို့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ကျနော့်ရဲ့ မှတ်ပုံတင်ကိုပါ တခါထဲ ထုတ်ပေးလိုက်တော့တယ်။
"ဟုတ်ကဲ့ ရပါပြီ .. မနန်းယွန်းဝေ အခန်းက ၂၀၂ပါ .. ဒီမှာပဲ ထိုင်စောင့်ချင်ရင်ရတယ် ... ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားမယ်ဆိုလဲ ဖြစ်ပါတယ် .. အခန်းရရခြင်း ကျမတို့ အကြောင်းကြားပေးပါ့မယ် .. အကယ်၍ အိတ်ထဲမှာ အရေးကြီးပစ္စည်းမပါလို့ အပ်ထားချင်တယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပါတယ် .. ဒီဟာကတော့ ဟိုတယ်ရဲ့ wi-fi password ပါ"
"ဟုတ် .. ကျေးဇူး"
အဲဒီနောက်တော့ ယွန်းနဲ့ ၀ါဆိုဦး ဟော်တယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တခြားကိစ္စတွေ အမေးအဖြေလုပ်နေကြတယ်။ မနက်စာကို ဘယ်အချိန်ထိ ကျွေးတယ်တို့၊ ရေကူးကန်ကို ဘယ်အချိန်သုံးလို့ရတယ်တို့ ဘာတို့ပေါ့ ..။ မိန်းမလှလေး နှစ်ယောက် စကားပြောနေတာ တကယ်တမ်းတော့ ကြည့်လို့ကောင်းပေမယ့် ကျနော့်စိတ်ထဲ အခုအချိန်ကစပြီး ယွန်းနဲ့ တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ ဖြစ်သွားကြပြီဆိုတဲ့ အတွေးက ၀င်နေတော့ သူတို့နားမှာ ဆက်မနေချင်တော့ဘူး။ ကျောပိုးအိတ်ကို ကောင်တာပေါ် တင်ပေးခဲ့ပြီး ဆေးလိပ်သောက်ချင်လို့ဆိုပြီး ရီဆက်ရှင်ထဲကနေ ပြန်ထွက်ပြီး၊ လမ်းမဘက်ကို မျက်နှာစာပြုထားတဲ့ ပေါ်တီကိုအောက်မှာ ကွန်ကရစ်တိုင်လုံးကြီးတစ်ခုကို ကျောမှီ၊ ခြေထောက်တစ်ဖက်နဲ့ နောက်ပြန်ထောက်ထားရင်း စီးကရက် တစ်လိပ်ကို မီးညှိလိုက်တယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ ခပ်သွက်သွက် ဖွာလိုက်တာ စီးကရက်က လက်ထဲမှာ တော်တော် ခရီးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ နောက်ဘက်ကနေ ကျနော့် နာမည်ကို လှမ်းခေါ်သံကြားရတယ်
"ကိုထွန်း .. အဲဒီမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ"
ကျနော် လှည့်ကြည့်တော့ ရီဝေေ၀ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်နေတဲ့ နန်းယွန်းဝေကို လက်ကလေးနှစ်ဖက် သူ့ကိုယ်ရှေ့မှာယှက်ထားရင်း နောက်နားမှာ ရပ်နေတာတွေ့တယ်။ သေချာကြည့်လိုက်တော့ လက်ကလေးတွေက ငြိမ်မနေဘူးရယ်။ မိန်းကလေးတွေ အနေရခက်တဲ့အခါမျိုး၊ တစ်ခုခုကို ချီတုံချီချ ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဖြစ်သလို လက်ချောင်းလေးတွေ အချင်းချင်း ဆုပ်နယ်လေနေရဲ့ ။ ဒီလောက်ဆို ကျနော် သဘောပေါက်ပြီ .. နောက်ထပ် စဉ်းစားမနေတော့ဘူး။ လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ စီးကရက်ကို ချက်ချင်း မြေပေါ်ပစ်ချပြီး၊ ဖိနပ်ထိပ်နဲ့ ဖိပြီး နင်းပစ်လိုက်တယ်။ ဒါကို လိုက်ကြည့်နေတဲ့ ယွန်းရဲ့ လက်ကို ဆတ်ခနဲ ဆွဲပြီး အထဲကို ပြန်ဝင်လာတာ၊ ကျနော် ဆွဲခေါ်ရာတလျှောက် အပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ လိုက်လာရတယ်။
"ကို .. ထွန်း !! .. ဘယ်သွားမလို့လဲ"
"ရေကူးကန်ဘက်မှာ တစ်ခုရှိတယ်တဲ့ .. အဲဒီဟာက ပိုကောင်းမယ်"
၂၁ရာစုရဲ့ လူသားတွေပဲ .. ဒီလောက်ပြောယုံနဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ်။ လူသူကင်းရှင်းနေတဲ့ လျှောက်လမ်းတလျှောက် ခပ်မြန်မြန် လာခဲ့ကြတာ ရေကူးကန်ဘက်မှာ (ကျား၊ မ) ဆိုပြီး ပြထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ ယွန်းက ကျနော့်လက်ကို ဆွဲပြီး ရှေ့ ကနေ ခပ်တည်တည်နဲ့ ၀င်သွားတယ်။ အနက်ရောင် သစ်သားတံခါးကို သူက အရင်တွန်းဖွင့်လိုက်ပြီး၊ အားနဲ့ ကျနော့်ကို ဆွဲသွင်းလိုက်တာ ကျနော်တောင်မှ နောက်ကို ခြေသုံးလေးလှမ်းလောက် ဆုတ်ပြီး ကိုယ်ဟန်မပျက်အောင် ထိန်းလိုက်ရသေး။ ဟ .. ဒီကောင်မလေး ကြမ်းလှချည်လားဆိုပြီး မျက်လုံးပြူးပြီး လှမ်းကြည့်နေခိုက် .. ၀ုန်းဆိုပြီး ပြေးဝင်လာတာ နည်းတဲ့အရှိန် မဟုတ်ဘူး။ လည်တိုင်ကို အတင်းဆွဲခိုဖက်ပြီး တအားသောင်းကျန်းတော့တာပဲ။ သူ့နှုတ်ခမ်းကို ဆွဲစုပ်ထားတာကို လက်စားများချေချင်နေလား မသိဘူး။ ကျနော့် နှုတ်ခမ်းတွေကို အတင်းစုပ်နမ်းတာ .. လူကို သွေးတွေတောင် ဒိုင်းခနဲ ဆောင့်တက်လာတယ် ...။
ကားပေါ်မှာတုန်းက သူ့ဖုတ်ဖုတ်လေးကို စိတ်ကြိုက်ကလိထားတာကိုများ အညိုးထားသလား အောက်မေ့ရတယ် ကိုယ့်ဆြာတို့ရေ .. ရင်ချင်းအပ်၊ နှုတ်ခမ်းချင်းအပ်ထားရင်းကနေ ကျနော့်ခါးပတ်ခေါင်း၊ ဘောင်းဘီးကြယ်သီး၊ ဇစ်၊ ဘောက်ဆာ အားလုံးကို ဇိုးခနဲ ဇတ်ခနဲ ဖယ်ပစ်လိုက်တာ ခပ်မာမာ ပြန်ဖြစ်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ကောင်က အသင့်အနေအထားနဲ့ အပြင်ဘက်ကို ထွက်ကျလာပါရော ..။
“၀ိုး .. မိုက်တယ် .. မြင်လိုက်ရတော့ ပိုယားလာပြီ”
ဖြတ်ခနဲ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ချလိုက်လိုက်ပြီး လိင်တန်အရင်းကို လက်နဲ့ဖမ်းထိန်းကိုင်၊ ရမ္မက်လွှမ်းတဲ့ အသံလေးနဲ့ အံကြိတ်ညည်းပြောပြီး ပါးစပ်ကို ဟပြီး လှမ်းငုံလိုက်တာ ဆံနွယ်ညိုတွေတောင် မျက်နှာကို ဖုံးသွားလို့ လက်တစ်ဖက်နဲ့ ပြန်သပ်တင်လိုက်ရတာ တွေ့တယ်ဗျ။ လိင်တန်ထိပ်ဖူးကို လှမ်းအငုံခံလိုက်ရတဲ့ ကျနော်ဆိုတာကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့။ ဟားးးး ဆိုပြီး အကျယ်ကြီး အော်ညည်းမိပြီး လက်တစ်ဖက်က ယွန်းရဲ့ ခေါင်းကို လှမ်းဆွဲ၊ ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကတော့ လူယိုင်မထွက်သွားအောင် နောက်မှာရှိတဲ့ ဘေဇင်ကို နောက်ပြန်လှမ်းထောက်ထားရတယ်။
ယွန်းဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ရင် အစိမ်းမဟုတ်ဘူး။ ဘလိုးဂျော့ကို အတွေ့အကြုံ ရှိပုံရတယ်။ ပါးစပ်ထဲရောက်သွားတဲ့ လိင်တန်ကို ပါးကလေးတွေ ချိုင့်ခွက်ဝင်အောင် အားနဲ့ ပြင်းပြင်းစုပ်ပေးသလို၊ လျှာနဲ့လည်း ဒစ်အောက်ခြေမေးသိုင်းကြိုးနေရာကို တစ်ချိန်ထဲမှာ ပတ်ထိုးပြီး လျက်လျက်ပေးနေတာ။ လူဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်ဘူး။ အာကာသထဲကို သွားဖို့ လွှတ်တင်လိုက်တဲ့ လွန်းပျံယာဉ်ရဲ့ ထိပ်မှာ လူကို ကပ်ချည်ပြီး ထားတာ ခံလိုက်ရတဲ့အလား၊ ဘယ်လောက်မှ မကြာတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ အမြင့်ဆုံးကို ရောက်သွားသလို ခံစားရတာ။ နားထဲမှာလည်း လေတွေ တိုးနေသလို တ၀ူးဝူးနဲ့တောင် ဖြစ်နေတယ်။
"ယွန်း ... ခန .. ခန"
ခြေဖျားထောက်ပြီး ကော့တက်သွားရာကနေ သတိထားပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲကနေ လီးကို အတင်းပြန်ဆွဲထုတ်တော့ .. ဘာလုပ်တာလဲဆိုပြီး ခပ်ငေါက်ငေါက်အော်ပြီး မကြည်သလိုနဲ့ ကြည့်တယ်ဗျ။ လိင်စိတ်တက်နေတဲ့ ကျနော်လည်း ဒီလောက်တောင် ဖြစ်လှကွာဆိုပြီး .. ယွန်းကို လိုးမလိုဆိုပြီး ခပ်ဆာဆာနဲ့ ပြောလိုက်ယုံမက .. ဘောင်းဘီထဲထိုးထည့်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ကွန်ဒွန်းကိုလည်း ချက်ချင်း ယူပြလိုက်ရတယ် (နေသူရိန် အားကျလို့ အမြဲဆောင်ထားတာ .. ခိ ခိ ;D)။ သောက်ကောင်မလေး .. အဲဒီတော့မှ မျက်နှာက ချက်ချင်း ပြန်ကြည်သွားပြီး .. ပေး ယွန်းကိုပေးဆိုပြီး လက်ထဲကနေ ဇတ်ခနဲတောင် ယူသွားတာ .. ကိုယ်တောင်မှ မဖောက်လိုက်ရပါဘူး ... အိတ်ဒေါင့်ကို ပါးစပ်လေးနဲ့ ကိုက်ဖောက်ပြီး အထဲက အကြည်ပြားလေးကို ထုတ်ပြီး (အမယ် .. လေနဲ့တောင် ဖူးခနဲ မှုတ်လိုက်သေး) ထိပ်ပေါ်တင်ရင်း ဖိချလိုက်တာ .. တံတွေးရည်တွေစိုနေတဲ့ အတန်တလျှောက် ချောချောမောမောပဲ ဖုံးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်
"ကိုထွန်း .. ယွန်းကို အားမနာနဲ့ အထဲမှာ စိုနေပြီ သိလား"
"အေး .. ဒါဆို ဒီမှာ လက်ထောက်ပြီး ကုန်းပေး"
ကျနော်က အချိန်မဆွဲသလို ယွန်းကလည်း ခပ်မြန်မြန်ပဲ။ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေရာက ပြန်ထ၊ ဘေဇင်ကို မျက်နှာမူပြီး ကျနော့်ကို ကျောပေးထားလျက်ကနေ အသားကပ်ဘောင်းဘီကို ကားပေါ်မှာတုန်းကလို လိပ်ချပေးတော့ ဖွေးဆွတ်နေတဲ့ ပန်းသီးပုံ တင်ပါးလုံးလုံးအိအိလေးတွေ သွေးဆူဖွယ် ပေါ်လာတာပေါ့။ အဲဒီ ဖင်ဖွေးဖွေးလေးတွေနောက် ချက်ချင်းနေရာယူပြီး ခါးကျင်ကျင်လေးကို လက်နဲ့ ဖိချလိုက်တော့ တင်တွေ ကော့ထွက်လာတာ အရည်ကြည်တွေလဲ့နေတဲ့ အဖုတ်မြောင်းက နောက်မှာ အတိုင်းသားပေါ်လာတယ်။ ဘာပြောကောင်းမလဲ .. ခပ်ဖောင်းဖောင်း အနားသားနှစ်ဖက်ကြားမှာ အမြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာရဲ့ အောက်ဘက်ကို မှန်းထောက်ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တာ အားးးဆိုတဲ့ ယွန်းရဲ့ အော်သံနဲ့ အီးးး ဆိုတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ညည်းသံက တပြိုင်တည်းကို ထွက်လာတော့တာပဲ ...။
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 11:42